တဇောက်ကန်း ကြမ်းသလား - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကြီးမားတဲ့ ဧည့်ခန်းကြီးထဲက အီတလီလုပ် သားရေဆိုဖာ အနက်ရောင်ကြီးပေါ် ထိုင်နေ သည် ..။ သူမဆံပင်သည် ပုခုံး အထိ ရှည်သည် ..။ နက်မှောင် သန်စွမ်းတဲ့ ဆံပင်တွေ၊ သူမမျက်နှာ ဖွေးဖွေးလေး၊ သူမ မျက်လုံး ဝိုင်းစက်စက်လေးများ၊ ဆေးမဆိုးဘဲ ရဲနေသည့် နှုတ်ခမ်း ဖောင်းဖောင်းအိအိလေး၊ နှာတန်ချွန်ချွန်လှလှလေး၊ ပိန်သည် ထင်ရတဲ့ သွယ်လျတဲ့ ကိုယ်လုံးက အကွေ့အကောက် အနိမ့်အဖောင်းတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ လိုအပ်တာတွေ ရှိနေသည် ..။ ဒါတွေ အားလုံး စုပေါင်းလိုက်တော့ သူမသည် အလွန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကြွေရုပ်ကလေး တစ်ရုပ်လို ဖြစ်နေသည်။
သူမသည် အိုဗာတင်း ပူပူတစ်ခွက်လုံး သောက်လိုက်ပြီး မကြာခင် မျက်လုံးတွေ လေးလာသည် ..။
အိပ်ချင်လာသည် ..။ ဧည့်ခန်းက ဆိုဖာမှာ တီဗွီ ထိုင်ကြည့်နေရာက မိမိ အိပ်ခန်းထဲကို သွားအိပ်တော့မည်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိဆဲ …
“ဒီမှာ .. ဆူးခက် ..နင်ဟာ ဆူးခက် နာမည်ခံပြီး ဒို့အဖွဲ့ထဲကို ထိုးဖောက် ဝင်လာတဲ့ ..ညထောက်လှမ်းရေးက မူမူ ဆိုတာ ဒို့သိပြီးပြီ.. ဒို့မှာ နင်တို့ ထောက်လှမ်းရေးတွေထဲကို ထိုးဖောက် သတင်းယူနိုင်တဲ့ အဆက်အသွယ်တွေ ရှိနေတယ်..”
အန်တီပင်စီ က ရုတ်တရက်ကြီး ပြောလိုက်လို့ မူမူ မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားသည် ..။ သူ့ကျောပိုးအိတ်ဆီကို လက်ရောက်သွားသည် ..။ အန်တီပင်စီက ရယ်မောနေသည် ..။
“ ဒီမယ်.. မူမူ ..မင်းကျောပိုးအိတ်ထဲက သေနတ်ကို ဒို့သိမ်းလိုက်ပြီးပြီ .. မင်း .. နောက်ကျသွားပြီ .. မင်း မျက်လုံးတွေ လေးလာပြီ.. မင်း .. မကြာခင် အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ် .. မင်းသောက်တဲ့အထဲ ဒို့ ဆေးခပ်ထားပြီးပြီ .. ဒို့ကို လူလည်ကျလို့ မရဘူးကွ .. ဟေ့ .. ဝေမှိုင်းချို ဘယ်မှာလဲ .. ခေါ်စမ်း ..”
မူမူ .. ခေါင်းထဲမှာ အပြေးအလွှား စဉ်းစားနေ သည် .. ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…။ ဘယ်လိုလွတ်အောင် ပြေးမလဲ ..။ သူ့ဌာနအကြီးအကဲက ဒီစစ်ဆင်ရေးဟာ သူတစ်ယောက်ထဲသိတဲ့ ကိစ္စလို့ မူမူကို တာဝန်ပေးတုန်းက ပြောသည် ..။ ဘယ်လို သူတို့ သိသွားလဲ ..။
မူမူ မျက်စိတွေ တကယ်ဘဲ လေးလာသည် ..။ ဒါကြောင့် အန်တီပင်စီ သဘောကောင်းလှချည်လား လို့ စဉ်းစားနေတာ ..။ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း .. အိုဗာတင်းတွေ ဖျော်တိုက်နေလို့ ..။ မူမူ ဆေးမိသွားပြီ ..။ အန်တီပင်စီ ခေါ်ခိုင်းတဲ့ ဝေမှိုင်းချို ရောက်လာ သည် ..။ ဝေမှိုင်းချို … မူမူဆီကို တစ်လှမ်းချင်း တိုးကပ်လာသည် ..။ အန်တီပင်စီက
“ဒို့အဖွဲ့ကို ပေါ့သေးသေးထင်ပြီး .. တေလေမလေး အယောင်ဆောင်ပြီး လာထောက်လှမ်းတဲ့
ဆူးခက် အမည်ခံ မူမူကို သင်ခန်းစာ ပေးလိုက်စမ်း.. ဝေမှိုင်းချို ..”
လို့ ပြောတော့ ဝေမှိုင်းချိုက ပုခုံးတွန့်ပြပြီး ..
“စိတ်ချ.. အန်တီပင်စီ .. ကျနော် သင်ခန်းစာ ပေးပြီးရင် .. နယ်စပ်မှာ ရောင်းစားလိုက်မယ် . .”
လို့ ပြန်ပြောပြီး မူမူရဲ့ လက်မောင်းကို ဆုပ်ကိုင်ကာ အနောက်ဘက်ကို ဆွဲခေါ်လေသည် ..။ မူမူ ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် မူးဝေနေသည် ..။ ရုန်းကန် ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့ ..။ ဝေမှိုင်းချို ခေါ်ရာကို မလိုက်ချင်ဘဲနဲ့ လိုက်ပါနေရသည် ..။ အခန်းတစ်ခုထဲကို ရောက်သွားသည် ..။ ဝေမှိုင်းချို … မူမူ့ လက်နှစ်ဘက်ကို
ပူးပြီး.. အနက်ရောင် လည်စည်းတစ်ခုနဲ့ ချည်နှောင် သည် ..။ မူမူ .. ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ့ သိတစ်ချက် မသိတစ်ချက် .. မူးဝေနေသည် ..။ ပူးတုတ်ထားတဲ့ သူမ လက်နှစ်ဘက်ကို နံရံအမြင့်က ဂျိတ်တစ်ခုမှာ ချည်နှောင်လိုက်ပြန်သည် ..။
“မင်းလေးက ကိုယ်လုံး တော်တော် မိုက်တာဘဲကွ ..”
ဝေမှိုင်းချိုက နံရံကို မျက်နှာမူပြီး လက်နှစ်ဘက် ပူးမြှောက်ပြီး ချည်တုတ်ထားလို့ .. တင်ပါးတွေ အနောက်စွင့်သလို ဖြစ်နေရတဲ့ မူမူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးကို စူးစူးဝါးဝါး ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်ရုံမကဘဲ အနောက်ကို စွင့်ထွက်နေတဲ့ သူမ တင်စိုင်တွေကို ဖျန်းကနဲ ဖျန်းကနဲ လက်ဝါးနဲ့ ရိုက်လေ သည် ..။ ဖြူဖွေးလွန်းတဲ့ တင်သားအိအိများ.. လက်ဝါးကြီးနဲ့ ရိုက်လိုက်တာကြောင့် နီရဲသွားကြသည် ..။
“တောက် .. ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင် .. မင်း .. အပျို စစ်စစ်လား …”
မူမူ မဖြေ ..။ မဖြေချင်လို့ မဟုတ် ..။ ဆေးအရှိန်ကြောင့် အရာရာ လေးပင်နေ သည် ..။ ပါးစပ်လည်း ဖွင့်လို့ ဟလို့မရ..။
“မေးနေတယ်.. ဖြေလေ .. မင်း.. အပျိုလား .. မင်း ယောင်္ကျားနဲ့ လုပ်ပြီးပြီလား ….”
ဝေမှိုင်းချိုက တဖျန်းဖျန်းနဲ့ ရိုက်ပြန်သည် ..။ ပြေလျော့ကာ ကျွတ်လုလု ထမိန်ကို ဝေမှိုင်းချို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် . . ။ ပင်တီလေးက ဟောင်းနွမ်းပြီး ပါးနေတော့ တင်အိအိတွေက အတိုင်းသား မြင်နေရ သည် ..။
“ဖြေလေ ..မင်း အပျိုုလား..”
မူမူ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည် ..။ ဝေမှိုင်းချို .. ကျန်ရှိနေသော အတွင်းခံ ပင်တီလေးကို ဆွဲချွတ်သည် ..။ မူမူ့ အောက်ပိုင်း တစ်ခုလုံး အဝတ်မဲ့သွားသည် ..။ ဝေမှိုင်းချိုသည် လှလွန်းသော မူမူရဲ့ တင်ပါးတွေကို သေသေချာချာ တပ်မက်စွာနဲ့ကြည့်ပြီး တင်ပါးများ အောက်ကို လက်နှိုက်ပြီး မူမူရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို ကိုင် သည် ..။ အုံဖောင်းဖောင်းကို ပွတ်နေသည်..။ လက်ချောင်းတွေနဲ့ အတွင်းကို နှိုက်သည် ..။
“ အာ့ …. ”
မူမူ့ ပါးစပ်လေးဆီက ညည်းသံလေး ပေါ်ထွက်လာ သည် ..။ ဝေမှိုင်းချို သူ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်သည် ..။ မူမူရဲ့ စွင့်ကားပြည့်တင်းသော တင်တွေက တင်းလုံးနေသည် ..။ သူမ တင်ပါးလှလှတွေကို စိုက်ကြည့်နေပြီး ဝေမှိုင်းချို တံတွေးကို ဂွတ်ကနဲ မြိုချလိုက် သည် ..။ အင်း.. ဖင်တွေ လှလွန်းလို့။
ဝေမှိုင်းချို အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆက်ချွတ် သည် ..။ အမွှေးမဲမဲ လိန်ကောက်ကောက်တွေကြားက သူ့လိင်တန်ကြီးသည် သံချေးတက်နေတဲ့ သံပိုက်လုံးကြီး တစ်ချောင်းလို မဲမဲတုတ်တုတ်ကြီး ထောင်နေသည် . .။
မူမူ စိတ်တွေ အရမ်း တုန်လှုပ်နေသည် ..။ မိန်းမသား တန်မဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းထဲကို အသွင်ယူ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ပြီး ထောက်လှမ်းတယ် ဆိုကတည်းက ဒါမျိုးတွေ တစ်နေ့ ကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတာ မူမူ ထည့်တွက်ထားပြီးသား ..။ အခုတော့ ကြုံလာရပြီ ..။
“ဘုရာ…ဘုရား…။ ငါ့ကို သူ့ဟာကြီးနဲ့ လုပ်တော့မယ်။”
မူမူ့ ခြေနှစ်ချောင်းကို သူ့ခြေထောက်တွေနဲ့ တွန်းရွှေ့ကားစေတော့ မူမူ့ တင်ပါးတွေကြားက ဖောင်းမို့
တဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို သေသေချာချာ မြင်လိုက်ရသည် ..။ ဝေမှိုင်းချိုရဲ့ လိင်တန်ကြီး ဆတ်ကနဲ လှုပ်သွား သည် ..။
မူမူ .. မူးဝေကာ ခေါင်းငိုက်စိုက် ဖြစ်နေသည် ..။ ဝေမှိုင်းချိုသည် သူ့လက်ခုပ်ထဲကို တံတွေးများ ထွေးထည့်ပြီး သူ့လိင်တန်ထိပ်ပိုင်းကို သုတ်လိမ်း သည် ..။ မူမူရဲ့ တင်သားအိအိတွေကို သူ့ဘယ်လက်နဲ့ဖြဲကာ ညာလက်နဲ့ သူ့လိင်တန်ကို အရင်းကနေဆုပ်ကိုင်ပြီး .. အင်္ဂါစပ်ထဲကို ထိုးသွင်းသည် ..။
မူးဝေပြီး ခြေတွေလက်တွေ ထုံလေးပြီး .. မရုန်းနိုင်.. မပြေးနိုင် ဖြစ်နေပေမဲ့ သူ့ကို ဝေမှိုင်းချို ဆိုတဲ့ ကောင် အတင်းလုပ်နေတယ် ဆိုတာတော့ မူမူ သိနေသည် ..။ သူမ အင်္ဂါစပ်ထဲကို မဆန့်မပြဲ.. အတင်းကြီး ထိုးသွင်းနေလို့ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကြောင့် ဆတ်ဆတ်ခါနေသည် ..။
ဝေမှိုင်းချိုသည် ရက်ရက်စက်စက်.. အတင်းကြီး ထိုးသွင်းနေသည် ..။ မူမူရဲ့ ခါးလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး .. ထိုးဆောင့်နေသည် . .။ မူမူက အော်တော့ ကြမ်းပြင်မှာ ကျနေသော သူမရဲ့ ပင်တီဘောင်းဘီလေးကို ကောက်ပြီး သူမပါးစပ်ထဲကို ထိုးထည့်သည် ..။ ဝေမှိုင်းချို အင်းကနဲ အင်းကနဲ အားယူကာ မူမူ့ကို ဆောင့်ထည့်နေသည် . .။ လောကငရဲ ဆိုတာ ဒါဘဲ ဖြစ်မည်လို့ မူမူ တွေးမိသည် ..။ နာကျင်မှုက ဆိုးဝါးလှသည် ..။ အင်္ဂါစပ် အတွင်းသားများ ပွန်းပဲ့ကုန်ပြီ ထင်ရသည်။
“ အင်း….အင်း…အင်း …….”
မညှာမတာ ဝေမှိုင်းချို ဆောင့်ထိုးထည့်နေသည် ..။ သူ့လက်တွေက မူမူရဲ့ ရင်စိုင်အိအိတွေကို ဖျစ်ညှစ်ထားသည် ..။ အင်းကနဲ.. အင်းကနဲ အားယူယူပြီး.. မူမူ့ကို သူထိုးဆောင့်နေသည် ..။ နာကျင်မှုတွေက ဆိုးဝါးလှသည် ..။ ဝေမှိုင်းချိုရဲ့ ပုံမှန်ထက် ကြီးမား သော လိင်ချောင်း တုတ်တုတ်ကြီးသည် အတင်းကြီး ဝင်ထွက်နေသည် ..။ ကြပ်တည်းလှသော မူမူရဲ့ အပျိုစစ်စစ် အင်္ဂါစပ်လေးကြောင့် ဝေမှိုင်းချိုသည် ခဏအတွင်းမှာဘဲ ပြီးသွားသည် ..။
သုတ်ရေတွေ တပုံကြီး မူမူ့ အင်္ဂါစပ်အတွင်း ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး … မူမူ့ ရင်သားစိုင်တွေကို ဆွဲကိုင်ကာ .. တောရိုင်းသတ္တဝါ တစ်ကောင်လို အော်ဟစ်လိုက်သည် ..။ ဝေမှိုင်းချိုရဲ့ အော်သံကြီးကို သူမ အခန်းက ခပ်သဲ့သဲ့ကြားလိုက်သော အန်တီပင်စီ သည် သူ့ကောင်တော့ အသွင်ယူတဲ့ မူမူကို ဝါးလို့ ကောင်းနေပြီလို့ သိလိုက်သည် ..။
အင်း ..တကယ်တော့ ..ဝေမှိုင်းချိုသည် တဏှာပေမ ကို တစိုက်မတ်မတ် လိုက်စားခဲ့ရုံမက သူ့လိင်တန်ကို .. ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ခွဲစိတ်ပြီး ပြုပြင်ထားသည်ကို အတွင်းသိ အန်တီပင်စီက အားလုံးသိနေခဲ့ သည် . .။ ဒါကြောင့်လဲ သူတို့ အဖွဲ့ကို လာဖျက်ဖို့ အတွင်းလှိုက်စားဖို့ ကြံတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးမ မူမူကို ပညာပေးဆုံးမဖို့ ဝေမှိုင်းချိုကို တာဝန်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပေသည် . .။
မူမူ ကြမ်းပြင်မှာ ခွေခွေလေး လဲနေသည် . .။ အဝတ်အစား မရှိလို့ သူမရဲ့ မိမွေးဖမွေးတိုင်း အလှအပတွေက အရှိကို အရှိအတိုင်း တွေ့မြင်နေရသည် .. ။ စွင့်ကားသော တင်သားဖြူဖြူများသည် စောစောက ဝေမှိုင်းချို အကြိမ်ကြိမ် ကျင့်ကြံခဲ့ပြီး.. ထုတ်လွှတ်ထားသော သုတ်ရေများ ပေကျံနေ သည် ..။
နေအုပ်စိန် ရောက်လာသည် . .။ အန်တီပင်စီက မင်းအလှည့်.. ထောက်လှမ်းရေးမကို ပညာပေး ဆုံးမလိုက်စမ်းဆိုလို့ လာကြည့်သည် ..။ ဒီကောင်မ သူတို့ အဖွဲ့ထဲကို ဆူးခက် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဝင်လာစကတည်းက နေအုပ်စိန် သူမကို သတိထားမိနေခဲ့ သည် ..။ ရင်မို့မို့ ခါးသိမ်သိမ်နဲ့ ကော့နေတဲ့ တင်စိုင်လှလှတွေကို သူအာသာငန်းငန်းကြည့်ကာ ပြစ်မှားခဲ့ဘူးသည် . .။ အခု ဒီကောင်မက သူတို့ကို လာထောက်လှမ်းတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးမ ဖြစ်နေ သည် ..။ စိတ်ကြိုက် လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိသည် ဆိုတော့ နေအုပ်စိန် အရမ်း သဘောကျနေသည်။
မူမူ ရှိနေတဲ့ အခန်းကို နေအုပ်စိန် လာဝင်ကြည့်တော့ မူမူ ခွေခွေလေး လဲနေပြီး ဝေမှိုင်းချို လက်ချက်နဲ့ ညစ်ပေနေသည် ..။ သူမ လက်နှစ်ဘက်ကို ပူးကာ တုတ်နှောင်ထားဆဲ ဖြစ်သည် ..။ နေအုပ်စိန် မူမူကို ဆွဲထူလိုက်သည်။ မူမူ.. မူးမော်နေဆဲ ..။ ခါးလေးကနေ ဆွဲဖက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်ခဲ့ သည် ..။ မူမူ မတ်တပ် မရပ်နိုင်..။ ရေတိုင်ကီ နံဘေး မှာ ဆောင့်ကြောင့်လေးထိုင်ပြီး ခေါင်းက ရေတိုင်ကီ ကို မှီထားသည် . .။
နေအုပ်စိန် မူမူ ပေါ်ကို ရေခွက်နဲ့ ရေတွေခပ်ပြီး လောင်းချသည် ..။ အေးလွန်းသော ရေကြောင့် မူမူ တုန်ခါသွားသည် . .။ လက်တွေကို တုတ်ထားလို့ ဒီကောင်မ သူမဖာသာ ပွတ်သပ်ဆေးကြောလို့ မရဘူး ..။ နေအုပ်စိန် သူ့ဘောင်းဘီ အိတ်ထဲက ခလုတ်ဓားကို ထုတ်ပြီး ဖြောင်းကနဲဖွင့်ပြီး ချည်နှောင်ထားတာကို ဖြတ်ပေးလိုက်သည် ..။ ရေတိုင်ကီ ဘေးတန်းပေါ်က ဆပ်ပြာတုံးကို မူမူရှေ့ ပစ်ချပေးသည် ..။
“ဆပ်ပြာနဲ့ မင်းတကိုယ်လုံးကို သေသေချာချာ ပွတ်တိုက်ပြီး ဆေးစမ်း .. ဟိုခွေးသူတောင်းစား .. လုပ်သွားတာ ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်သွားတယ် . .”
မူမူ ဆပ်ပြာတုံးကို ကောက်ယူကာ သူမ ကိုယ်တွေကို ပွတ်တိုက်သည် ..။ နေအုပ်စိန်.. သူမကို ကျောခိုင်းပြီး အိတ်ထဲက ၅ သုံးလုံး စီးကရက်ဘူးကို ထုတ်.. စီးကရက် တစ်လိပ်ကို ထုတ်ပြီး မီးညှိကာ သောက်သည် . .။ ဒါ နေအုပ်စိန်ရဲ့ မဟာ အမှား ..။ဘဆေးမိလို့ မူးဝေနေတဲ့ မူမူကို လျှော့တွက်တာ သူအမှားကြီး မှားသွားသည် ..။
မူမူသည် ရေအေးတွေ အလောင်းခံရလို့ အမူးပြေလာသည် . .။ ဆေးတန်ခိုးပျယ်စ ပြုနေပြီ ..။ ဝေမှိုင်းချို အတင်းကျင့်ထားလို့ သူမ ပေါင်ကြားနေရာက အလွန်အမင်း နာကျင်နေတာ တစ်ခုဘဲ ..။ အင်္ဂါစပ် အတွင်းထဲက မခံနိုင်လောက်အောင် နာကျင်နေ သည် ။ အတွင်းသားနုနုလေးများ .. စုတ်ပြတ် ပေါက်ပြဲကုန်ပြီ ထင်ပါရဲ့ . . .။
ထောက်လှမ်းရေးမှူး တစ်ယောက်မို့ မူမူသည် ကိုယ်ခံပညာရပ်တွေကို စနစ်တကျ နှစ်တွေလတွေ နဲ့ချီပြီး လေ့ကျင့်ထားခဲ့ သူမို့ သူမကို ကျောပေးကာ ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့ နေနေသော နေအုပ်စိန်ကို ရုတ်တရက်ကြီး ထတိုက်ခိုက်လေသည် .. ။ နေအုပ်စိန်လည်း မိန်းမကလဲဖြစ် ဆေးကလဲမိနေ… မုဒိန်းလည်း အကြိမ်ကြိမ် အကျင့်ခဲထားရသည် ဆိုပြီး အထင်အမြင်သေး .. လျှော့တွက်ထားခဲ့တာ . .။ နေအုပ်စိန် မူမူရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သံမံတလင်း ကြမ်းပေါ်ကို ဒူးထောက်ရက် ကျသွားသည် ..။ သူ့ခါးကြားမှ သေနတ် မူမူ လက်ထဲ ရောက်နေပြီ ..။
“ဖြောင်း” ကနဲ နေအုပ်စိန်ရဲ့ ခေါင်းကို သေနတ်ပြောင်းနဲ့ ရိုက်ချလိုက်သည် ..။ နေအုပ်စိန် လဲကျအသွား… မူမူ ဆင့်ကာဆင့်ကာ ဆောင့်ကန်သည် ..။ နေအုပ်စိန် မလှုပ်တော့..။
မူမူ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေဆဲ ..။ သူမ ရေချိုးခန်းထဲ ရှာဖွေကြည့်သည် ..။ ရေချိုးခန်းအတွင်း .. လျှော်ဖွတ်ပြီး လှမ်းထားတဲ့ ပြောက်ကျားပုံဖျက် ယူနီဖောင်း ဘောင်းဘီနဲ့ တီရှပ် အနက်ရောင် တစ်ထည်ကို တွေ့သည် ..။ သူမနဲ့ နဲနဲကြီးနေပေမဲ့ ကောက်ဝတ်ကာ နေအုပ်စိန် ခါးက ခါးပတ်ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး သူမခါးမှာ ပတ်လိုက်သည် ..။ ရေချိုးခန်း ပြူတင်းပေါက်မှာ သံတိုင်မရှိ . .။ အပြင်ကို ချောင်းကြည့်ပြီး လူလစ်တာနဲ့ အပြင်ကို ကျော်ဆင်းလိုက်သည် ။
ပြေးပြီ ..။ သူတို့ စခန်းအဖြစ် သုံးနေတဲ့ တိုက်အိုကြီး ရဲ့ အနောက်ဘက်က ဝါးရုံပင်တော စိမ်းစိမ်းတွေဆီကို မူမူ.. ပြေးပြီ . .။ ဝါးတောစပ်ကို ရောက်တော့ တိုက်အိုကြီးဆီက အော်ဟစ်သံတွေ ကြားရသည်။ သူ လွတ်ပြေးတာကို သိသွားကြပြီ …။ အတွဲလိုက် ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ မောင်းပြန်သေနတ်သံတွေ ဆူညံသွားသည် ..။ သူမဘေးက ဝါးပင်များကို တဖြောင်းဖြောင်း ကျည်များထိမှန်ကာ ဝါးပင်များ ကျိုးပဲ့ကုန်သည် . .။
ကျည်ဆံများက ပျားပိတုံးကောင်များလို.. တဝီးဝီး သူမနံဘေးက ဖြတ်သန်းနေသည် ..။ ကိုယ်ကို ကိုင်းညွှတ်ပြီး မြွေလိန်မြွေကောက် ကွေ့ပတ်ပြီး ပြေးသည် ..။ အနောက်က ရန်သူများ .. လိုက်ရင်း .. တထောင်းထောင်း ပစ်ခတ်နေသည် ..။ ပင်စည် တုတ်တုတ် သစ်ပင်တစ်ပင်မှာ ခဏ အကာအကွယ်ယူလိုက်ပြီး နေအုပ်စိန်ဆီက ရလာတဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်နဲ့ သူ့နောက်ကို ပြေးလိုက်လာတဲ့ ရန်သူတွေကို သေသေချာချာ ချိန်ရွယ်ကာ ပစ်သည် ..။
ဒုန်းကနဲ.. ဒုန်းကနဲ ပွိုင့် ၄၅ ကျည်ဆံများ.. ခုန်ထွက်သွားကြပြီး ရှေ့ဆုံးက ရန်သူနှစ်ယောက်ကို ထိမှန်သွားသည် ..။ ရန်သူများသည် သူမမှာ လက်နက်ပါသွားတာကို သိပုံမရဘဲ.. ပေါ့ပေါ့ဆဆ ပြေးလိုက်လာကြပုံရသည်….။ ကျန် ရန်သူများ အခုမှ သစ်ပင်များ နောက်ကို အကာအကွယ် ယူလိုက်ကြသည် ..။
ဆက်ပြေးသည် . .။ ရန်သူများ ပစ်ခတ်ရင်း ဆက်လိုက်လာကြပြန်သည် . .။ ဒီစခန်းကို သူမ စရောက်ကတည်းက စခန်းတည်နေရာကို လေ့လာထားခဲ့သည် ..။ ဒါသူတို့ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်တွေ လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုဘဲမို့ ..။ သူမ ဦးတည်ပြေးနေတဲ့ ဘက်မှာ ကားလမ်းရှိသည် .. ။ ဒီတောင်ကုန်းလေး ကျော်ရင် ရောက်ပြီ ..။ အနောက် က ရန်သူတွေ စောစောကလောက် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီး မလိုက်ရဲတော့..။ သူမမှာ လက်နက်ရှိကြောင်း သိသွားသလို သူတို့ လူနှစ်ယောက်ကိုလည်း မှန်အောင် ပစ်ပြခဲ့သည် မဟုတ်လား ..။
တောင်ကုန်းပေါ်ကို အားတင်းပြီး ပြေးတက်သည် ..။ အနောက်က လှမ်းပစ်ပေမဲ့ ထိရောက်မှု မရှိ ..။ တောင်ကုန်းရဲ့ ဟိုဘက် ဆင်ခြေလျှောကို ရောက်တော့ သူမ အသားကုန် ခြေကုန်ပြေးပြီ ..။ ခလုတ်တိုက်ပြီး ဒလိမ့်ခေါက်ကွေးကျသည် ..။ လူးလဲထ ကာ ဆက်ပြေးသည် ..။
ဟော ..။ ရှေ့မှာ ကားလမ်း . .။ ပစ္စတိုသေနတ် ကို ကျောမှာ ထိုးလိုက် သည် ..။ ဘုရားမ လို့ ကားတစ်စီးစီး လာပါစေ ..။ ခုထိတော့ ဘာကားမှ မတွေ့သေး။ နောက်က ရန်သူဆီက ပစ်ခတ်သံ မကြားသေး ..။ ကားလမ်းအတိုင်း သူမ ပြေးနေသည် ..။ အခုအချိန် အနောက်က ရန်သူသာ မှီလာပြီး ပစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်.. အကာအကွယ် မရှိ ထင်းထင်းကြီးမို့ သူမ မလွယ် …။ ဟင် …ကားသံလိုလို ကြားသည်…။
သူမ နောက်ကျောဘက်က ဖြစ် သည် ..။ဟော … ဟာ.. ဟုတ် သည် ..။ ကုန်ကားကြီး တစ်စီး …။ ကုန်းတက်ကြီးမို့ တဗြီးဗြီး အတင်းကြီး ရုန်းပြီး တက်လာသည် ..။ အီဆူးဇူး ခေါင်းတို ကုန်ကားကြီး .. တဖြေးဖြေး နီးလာ သည် ..။ အနီးရောက် မလာခင် အဝေးကြီးထဲက လက်တားလိုက်သည် . .။ ကားကြီး သည် အရှိန်နဲ့ လာနေ သည် …။
သူမ အော်ဟစ်ကာ တားသည် …။ လက် ဝှေ့ရမ်းပြ သည် . .။ ကားကြီးသည် သူမကို ကျော်ဖြတ်ကာ မောင်းသွားသည် ..။ သူမ အော်ဟစ်ပြီး လက်ပြကာ အနောက်က ပြေးလိုက်သည် ..။ နောက်လှည့်ကြည့်တော့… တောစပ်မှာ အနောက်က လိုက်နေတဲ့ ရန်သူများကို စတွေ့နေရပြီ ..။ ဟာ.. သောက်ဂွ ဘဲ …။
ရှူး….ရှူး… ဆိုပြီး ကုန်ကားကြီး ထိုးရပ်သွား သည် ..။ အို … တော်ပါသေးရဲ့ . .။ မူမူ ကားကြီးဆီကို ပြေးသွားသည် ..။ကားပြူတင်းပေါက်က ကားသမားက ငုံ့ကြည့်သည် ..။
“ကျမကို ကယ်ပါရှင်.. ဒုက္ခ ရောက်လာလို့…”
ကားသမားက သူမကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး ..
“ ကဲ…တက်..တက် …”
လို့ ခေါ်သည် …။ စိတ်သဘောကောင်းသော ကားဆရာကြောင့် မူမူ မြို့ကို ရောက်လာရသည် ..။ သူ ဒီတာဝန်ကို စပြီး တာဝန်ပေးခံရတုန်းက သူ့ ဌာန အကြီးအကဲ ပြောတာတွေကို ပြန်ကြားယောင်သည် ..။
“မူမူ .. မင်း အန္တရာယ် ကျရောက်မှာ ဘာမှမပူ နဲ့.. မင်းမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ထောက်လှမ်းရေးသမား တစ်ယောက် back up ရှိမယ် .. အနီးဆုံး .. ဒီမြို့လေးမှာ သူရှိနေမယ် .. သူ့ကို ဆက်သွယ်ဖို့က ….”
ဆိုပြီး ဆက်သွယ်ဖို့ လိပ်စာ.. ဖုန်းတွေ ပေးခဲ့သည် ..။ မူမူ ထိုလိပ်စာ.. ဖုန်းများနဲ့ backup သမားကို ဆက်သွယ်သည် ..။ တစ်ခုမှ မရ ..။ ဒုတိယအဆင့် Plan B အရေးကြုံ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက် (ဂယ်ပေါက်) အဖြစ် သူမသွားရန် တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့ လိပ်စာကိုလည်း ပေးသေးသည် ..။ ဒီတိုက်ခန်းကို သူမ ရောက်သွားသည် ..။
တိုက်ခန်းသော့ကို ဖွက်ထားတဲ့ နေရာကိုလည်း ပြောပြထားသည် ..။ သူမ အခု သွားကြည့်တော့ သော့မရှိ ..။ ဟာ.. ရက်စက်တယ်…။ ဘာမှလဲ ဆက်သွယ်လို့မရ ..။ ကြိုတင် စီမံထားတာတွေလဲ မဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေသည် …။ သူမမှာတော့ အသွင်ယူ under cover လုပ်ထားတာလည်း .. ဘွင်းဘွင်းကြီး ပေါ်သွားပြီး ရန်သူရဲ့ ရက်စက်စွာ မုဒိန်းကျင့်တာလည်း ခံလိုက်ရသည် …။
ထိုစဉ်က သူတို့ အကြီးအကဲသည် အပြောက ညွန့်နေသည် ..။ ထိုတိုက်ခန်းမှာ အရေးပေါ်သုံးဖို့ ငွေများ.. သိန်းချီပြီး ထားရှိကြောင်း .. လက်နက်မျိုးစုံ လဲ ရှိကြောင်း .. ဖုန်း.. ဆေးဝါး .. အကုန် သုံးလို့ရ သည် … တဲ့ . .။
သူတို့ .. အရေးပေါ် ဝင်ရောက် နေနိုင်.. ပုန်းနိုင် အောင်.. လိုတာယူနိုင်အောင် တိတ်တဆိတ် ထားရှိတဲ့ စခန်းငယ်လေး… တဲ့ ..။ အခုတော့.. သော့လည်း မတွေ့ ..။ ရက်စက်တယ် ..။ မတရားဘူး ..။ တာဝန်မကျေဘူး …။
ဟော… ကားတစ်စီး … သူမ ရောက်နေတဲ့ တိုက် အောက်ကို ထိုးဆိုက်လာသည် ..။ အိုး.. ရန်သူ ..။ သူ့ကို ရန်သူများ တွေ့သွားပြီ ..။ သူရှိရာ တိုက်ပေါ်ကို ရန်သူတစ်ယောက်က လက်ညှိုးထိုး ညွှန်ပြနေ သည် ..။ ပြေး….။ ပြေးပေအုံးတော့.. မိမူမူ …. ။
အာဖရိက လွင်ပြင်ထဲမှာ သမင်ပျိုမလေးကို ခွေးအ တအုပ် လိုက်ဆွဲနေသလို မူမူ အနောက်မှ ရန်သူတအုပ် ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်နေသည် ..။ မူမူ ပြေးရင်း .. ဓါတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓါတ်ဆီထည့်ပြီးလို့ ပြန်ထွက်ဖို့ ကားပေါ်တက်လိုက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ကားထဲ ဝင်လိုက်သည် ..။
“ဟိတ်.. ဘာလို့ ကားထဲ ဝင်လာတာလဲ …”
မူမူရဲ့ ပုံစံက စုတ်ပြတ်သော အဝတ်အစားတွေနဲ့ ပေရေညစ်ပတ်နေလို့ မိန်းမက ကြောက်သွားပုံရ သည် ..။
“မောင်း.. မောင်း.. ဒီနေရာက မြန်မြန် မောင်းလိုက်ပါ …. ”
“နင် .. ဆင်း.. ငါ့ကားပေါ်ကဆင်း … အခု ဆင်း ..”
ရန်သူတွေ မြင်သွားပြီး တအားပြေးလိုက်လာနေ သည် ..။ မူမူ သေနတ်ကို ခါးကြားက ဆွဲထုတ်ပြီး ကားမောင်းသူ မိန်းမကို ချိန်လိုက်သည် ..။
“ကဲ.. မောင်းဆိုမောင်း .. သေသွားချင်လား . .”
သေနတ်ကို မြင်တာတောင် အင်တင်တင်နဲ့ လုပ်နေသေးသည် ..။ မူမူ ကားပြူတင်းပေါက်ကနေ ပြေးလာနေသော ရန်သူ တအုပ်ကို ပစ်လိုက်သည် . .။ ဒိန်းကနဲ.. ဒိန်းကနဲ ကျယ်လောင်သော သေနတ်သံ များ ကြားတော့ မိန်းမသည် ကားကို တရှိန်ထိုး မောင်းထွက်လိုက်သည် . .။ ရန်သူအုပ်ထဲက တစ်ယောက် ခွေလဲကျသွားတာ.. ကားနောက်ကြည့်မှန် ကနေ မူမူ တွေ့လိုက်ရသည် . .။
“မောင်းသာမောင်း.. ဒီနေရာနဲ့ ဝေးလေကောင်းလေ …”
ကားမောင်းသူ မိန်းမ သူ့ကို အကဲခတ်နေတာကို မူမူ သတိထားမိသည် ..။ တော်တော် ဝေးဝေး မောင်းခဲ့ပြီး လမ်းဆုံလမ်းခွတစ်ခု ရောက်တော့…
“ဘယ်ဘက် ကွေ့လိုက် ..”
လို့ အမိန့်ပေးလိုက်သည် ..။ သူ နောက်ထပ် တစ်နေရာကို သွားမလို့ ..။ သူတို့လောကမှာ အရေးပေါ် ဂယ်ပေါက်တွေ ထားထားသည် ..။ တစ်ခုခု ရှေ့မှာပိတ်ဆို့ရင် ထွက်ဖို့ အရေးပေါ် ထွက်ပေါက်ပေါ့ .. ။
“ဟိုရှေ့က ကွမ်းယာဆိုင်လေး ရှေ့မှာ ရပ်လိုက် . .”
ကားရပ်သွားတော့ မူမူ ဆင်းသည် ..။
“စိတ်မရှိနဲ့.. ရှင့်ကို သေနတ်နဲ့ချိန်တာ .. အရေးပေါ်ဖြစ်နေလို့ … ကဲ.. သွားတော့ .. ကျေးဇူးဘဲ …”
တိုက်အိုကြီးပေါ်ကို တက်ခဲ့သည် . .။ လှေခါးက ကျဉ်းမြောင်းပြီး အနံ့အသက်က မကောင်း ..။ အပေါ်ထပ် ရောက်တော့ သော့ခတ်ထားတဲ့ အခန်းနှစ်ခန်းကို တွေ့ရသည် ..။ ဘယ်ဘက် အခန်းရှေ့က ခြေသုတ်ဖုံ ဂုံနီအိတ်စကို လှန်ဖယ်ကြည့်လိုက်သည် ..။ သော့တစ်ချောင်း တွေ့ပြီ ..။ အင်း…တော်ပါသေးရဲ့ ..။ ဒီတစ်ခု အဆင်ပြေလို့ ..။
သော့ဖွင့်လို့ရသည် ..။ အခန်းထဲ ဝင်.. တံခါးပြန်ပိတ်… မီးဖွင့်တော့.. သံမဏိ ဘီဒိုကြီး တစ်လုံးကို တွေ့သည် . .။ ဆွဲဖွင့်ကြည့်တော့ သော့ခတ်ထားသည်မို့ သော့ရှာရပြန်သည် …။ ဘီဒိုကြီး အပေါ်ကို ခြေဖျားထောက်ကာ စမ်းသည် ..။ သော့တွေ့ပြီ ..။ ဘီဒိုထဲမှာ… အရေးပေါ် လိုမဲ့ဟာတွေ ရှိနေသည် ..။ အားသွင်းပြီးသား ဆဲလ်ဖုန်းတစ်လုံး .. အူဇီစက်သေနတ်နဲ့ ကျည်ကပ်.. ၉မမ ပစ္စတိုလ်တစ်လက်နဲ့ ကျည်ကပ်အပိုကို ယူသည်..။ နောက်ပြီး .. ငွေစက္ကူတစ်ထုတ် .. ယူလိုက်သည် ..။
အင်း… မိန်းမဝတ် အဝတ်အစား တချို့လဲ ရှိနေသည် ..။ အနောက်ဘက်မှာ ရေချိုးခန်း ရှိနေသည် ..။ ရေလဲလာသည် ..။ ရေတဝ ချိုးလိုက်သည် ..။ မိမိရဲ့ အင်္ဂါစပ်နဲ့ စအိုပေါက်တွေက နာကျင် ကျိမ်းစပ်နေဆဲ ..။ ဒီနာကျင်မှုတွေကြောင့် ရန်သူတွေ အပေါ်ကို လက်စားခြေလိုစိတ်တွေ ပြင်းထန်နေသလို မိမိရဲ့ ဌာနအကြီးအကဲအပေါ် စိတ်နာမုန်းတီးမှုတွေ ကြီးမားနေသည် …။
ရန်သူတွေအထဲကို ထိုးဖောက်ဝင်ဖို့ မူမူသည် ဆူးခက်ဆိုတဲ့ တေလေမလေး အသွင်ကိုယူခဲ့သည် ..။ ရန်သူဘက်က အဆက်အသွယ်လို့ သိထားတဲ့ အန်တီပင်စီ အရှေ့မှာ ဆူးခက် အယောင်ဆောင် မူမူသည် လူတစ်ယောက်ကို ဓားနဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့သည် ..။ တကယ်တော့ လုပ်ဇာတ်တစ်ခုပါဘဲ ..။ အန်တီပင်စီ ယုံသွားစေဖို့ အယုံသွင်း ဇာတ်လမ်း ခင်းပြခြင်းပါဘဲ ..။ ဓားထိုးခံရတဲ့လူက မူမူတို့ အဖွဲ့ထဲကလူပါဘဲ..။ ရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်တဲ့အခါ ပြုလုပ်တဲ့ အထူးပြုလုပ်ချက်နဲ့ သရုပ်တူအောင် သွေးသံရဲရဲနဲ့ လုပ်ပြတာမို့ အန်တီပင်စီတို့လည်း တေလေမလေး ဆူးခက်ကို နေစရာ မရှိရင် လိုက်ခဲ့ဆိုပြီး သူတို့နဲ့ ခေါ်သွားခဲ့သည် . .။
ဆူးခက်သည် သူတို့နဲ့ မူးယစ်ဆေးရောင်းတဲ့ သယ်တဲ့ အလုပ်တွေကို ဝင်လုပ်သည် ..။ ဆူးခက် နာမည်
ရလာခါစဘဲ ရှိသေးသည် ..။ သူ့ဘဝမှန် ပေါ်သွားသည် ..။ တောက် …။ သူတို့ထဲမှာ သစ္စာဖောက် ရှိနေပြီ …။ မူမူ.. သူမ မုဒိန်းကျင့်ခံလိုက်ရတာကို တော်တော်ခံပြင်း နာကျည်းနေသည် ..။
အလုံပိတ် အခန်းတစ်ခုထဲ ခင်မောင်သိန်း (ခေါ်) အလီ ခွေးခြေတစ်လုံးနဲ့ ထိုင်နေသည် ..။ ဝါကျင်ကျင် မီးလုံးလေး တစ်လုံးဘဲ ထွန်းထားသော ဒီအခန်းလေးထဲ ပုတ်အဲ့အဲ့ အနံ့ နံနေသည် ..။ ခင်မောင်သိန်း (ခေါ်) အလီ … စိတ်တိုနေသည် ..။ ဒီအခန်းထဲ သူ့ကို ထည့်ထားတာ တော်တော်ကြာနေပြီ ..။ ရေလဲ ငတ် သည် ..။ တောက် .. စိတ်ကို ညှင်းပမ်းထားတာဘဲ ..။ ဒီမိုကရေစီနည်း မကျဘူး ..။ ခေတ်ဟောင်းက အမူအကျင့်တွေ ရှိနေတုန်းဘဲ ..။ ခင်မောင်သိန်း စိတ်ထဲမှာ သူ့ကို ဖမ်းလာသူတွေကို မုန်းတီးစိတ်တွေ များနေသည် ..။
ခင်မောင်သိန်းသည် အတိုင်အတောထူသူ ဖြစ်သည် ..။ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေကို သူအမြဲ တိုင်တမ်းလေ့ရှိသည် ..။ ခေတ်ပြောင်းလာတာကို အခွင့်အရေးယူပြီး စွာနေသူတွေထဲမှာ ခင်မောင်သိန်းက ရှေ့ဆုံးက …။
ကျွီကနဲ တံခါးပွင့်လာသည် ..။ အရပ်မြင့်မြင့် လူကောင်ထွားထွား လူတစ်ယောက် ဝင်လာသည် ..။ ဆံပင်က ဖရိုဖရဲနဲ့ ..။ ဒီလူထွားကြီးသည် စစ်ရောင် ဘောင်းဘီ နွမ်းနွမ်းနဲ့ အဖြူရောင် စပို့ရှပ် လက်တို ဝတ်ထားသည် ..။ မျက်နှာလေးထောင့် နှုတ်ခမ်းထူထူနဲ့ ရှေးခေတ်ဟောင်း မင်းသားကြီး ရွှေဘလို ရုပ်မျိုး ..။
အခုခေတ် လူငယ်တွေကတော့ ရွှေဘကို သိကြမည် မထင် ..။ ရွှေဘသည် တစ်ယောက်နဲ့ အများ ထိုးကြိတ်တဲ့ တောကြိုက် မင်းသားကြီး ဖြစ်သည်..။ သူ့လက်ထဲမှာက ရုံးသုံး ဖိုင်တစ်ခု ကိုင်ထား သည် ..။ ဒီလူ ဖိုင်တွဲအဖုံးကို ကြည့်လိုက်ပြီး.. မင်း နာမည် ခင်မောင်သိန်း (ခေါ်) အလီ နော် .. လို့ မေး သည် ..။
ခင်မောင်သိန်းက ဟုတ်တယ် လို့ ဖြေသည် ..။ ရေငတ်လွန်းလို့ ရေတောင်းသောက်ဖို့ ကြံနေတုန်း .. ဒီလူက ရုတ်တရက် ခင်မောင်သိန်းကို ဆောင့်တွန်းလိုက်သည် ..။ အိုး ..။ ဝုန်းကနဲ ခင်မောင်သိန်း နောက်ပြန်လန်ကျသွားသည် ..။
“ခင်.. ခင်ဗျား .. ဒါ … ဒါ ….. ဘာလုပ်တာလဲ . .”
လူထွားကြီးက ခွေးခြေကို ဆွဲယူကာ ထိုင်လိုက်သည် ..။ ဟာ..ဒါ…ဒါ….သက်သက် ရင့်တာဘဲ …။ ခင်မောင်သိန်း ထိုင်စရာ မရှိတော့ ..။
“ဒါ.. ကျုပ် ထိုင်နေတဲ့ ခွေးခြေ ..”
“ဒီမှာ ခင်မောင်သိန်း .. ခွေးခြေ တစ်လုံးဘဲ ရှိရင်.. ငါထိုင်မယ်… မင်းက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် .. မင်းက တရားခံ.. ငါက အမှုစစ် .. မထူးပါဘူးကွာ.. မင်းက ကြိုးစင်တက်ရမဲ့ အကောင်ဘဲ.. ထိုင်မနေပါနဲ့တော့ …”
“ ဘာ ..မင်း ဘာစကားပြောတာလဲ …”
“ဟုတ်တယ်လေ ..မင်းက တခြား..စွပ်စွဲခံရသူတွေ လိုမှ မဟုတ်တာ.. လုပ်တာတွေ သေချာနေတာဘဲ ..မင်းလိုကောင်က ခုလို လေကုန်ခံပြီး စစ်နေရဖို့ မဟုတ်ဘူး ..တစ်ခါထဲ ခေါင်းထဲ ကျည်ဆံတွေ တပြုံကြီး ထည့်ပြီး ရှင်းပစ်ရမှာ ..”
“ မင်း..မင်း..လွန်နေပြီ ..ငါ..ငါ့ ရှေ့နေ ခေါ်ပေး … တရားရုံးက စီရင်ချက် အမိန့် မချမချင်း.. မင်းသဘောနဲ့ မင်း.. ငါ့ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ မရဘူးကွ…”
“အာပါပါ..စွာလှချည်လား ..မင်းတို့ တကယ် လုပ်မလုပ် ဒို့ကအသိဆုံး ..ဒါကြောင့်လဲ ..တကယ်လုပ်တဲ့မင်းကို အချုပ်ထဲထားတာ ..”
“ စည်းဘောင်ကျော်ရင်တော့ မခံဘူးနော် ..”
“ထိုင်…ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်စမ်း ..လျှာမရှည်နဲ့ …”
ပေကပ်ကပ် လုပ်နေတဲ့ ခင်မောင်သိန်းကို လူထွားကြီးက လက်ထဲက ဖိုင်တွဲနဲ့ ဖောင်းကနဲ ဖောင်းကနဲ ရိုက်သည်။
“ထိုင်..မေးတာကိုဖြေ ..မတရား လုပ်နေတယ် မထင်နဲ့ .. မင်းလို တိုင်းပြည်သစ္စာဖောက် တစ်ကောင် ကို ဒီထက်တောင် လုပ်သင့်သေးတယ် ….”
ကြီးမားတဲ့ လက်သီးဆုပ်ကြီးတွေကို ခင်မောင်သိန်း ကြည့်ပြီး လန့်နေသည် ..။ တိုင်တာကနောက်.. အခု သူနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာက အရင် . .။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ် …. မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့မှာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ နယ်စပ် မိုးရေးကနေ မြန်မာဘက် တမူးမြို့ကို ကူးလာတယ် … ဧပြီလထဲ..တိတိပပ ဆိုရင် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့မှာ မုံရွာမြို့ကို ရောက်လာတယ် ..အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းတွေငွေယူပြီး လုပ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံသားကပ်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာတယ် …ရန်ကုန်က တာမွေ ရပ်ကွက်မှာနေပြီး ..သံတိုသံစ ရောင်းဝယ်တဲ့ အလုပ် ဘန်းပြပြီး ..တိုင်းပြည်ထဲ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ထိပါးစေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လုပ်တော့တာဘဲ ..မင်းကို ဒို့ စောင့်ကြည့်နေတာ ကြာပြီ …မင်းနောက်ကွယ်မှာ ဘာကောင်တွေ ရှိနေလဲဆိုတာ သိချင်လို့..ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားတာ ..အင်း ..လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က မင်း ထလုပ်လိုက်တဲ့ ဟာက ရုပ်ဆိုးလွန်းတယ် ..မင်း ..အခု လုပ်ခဲ့တာတွေ အားလုံး ချရေး ..အမှန်အတိုင်းရေး ..မင်းတိုင်တောမှာ ကြောက်ရင် ဒီအလုပ်တောင် လုပ်မစားတော့ဘူး ..ငါ့နာမည်.. တဇောက်ကန်း.. ရဲလွန်း ….”
လူထွားကြီးရဲ့ အသံက မာကျောသည် ..။ သူ့စကားကို နားမထောင်ရင် တကယ်ဆော်မဲ့ပုံ ..။ လူထွားကြီး ပေးတဲ့ စာရွက်နဲ့ ဘောလ်ပင်ကို အလိုလို လှမ်းယူမိရသည် ..။
“ရေး..မင်း ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အကုန်ရေး… ကွင်းတိုက်တာလဲ ရေး… ဖာချတာလဲ ရေး .. အဓိကက မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေ ရေးဖို့ဘဲ…တရားရုံး ရောက်လို့.. မင်းရှေ့နေက ရဲရှေ့ အစစ်ခံချက်..သက်သေခံ မဝင်ဘူးလို့ မင်းဖြောင့်ချက်ကို ဖျက်လဲ ငါက သောက်ဂရုမစိုက်ဘူး ..အဓိကက မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေ အားလုံး ရေးချ.. ဒါဘဲ.. မနက်ဖြန် မနက်စောစော.. ငါ ရီပို့တင်ရမယ် ..မတင်နိုင်ရင် မင်းကြောင့်…ငါ အထောင်း မခံရခင် မင်းကို ငါ အရင်ထောင်းမယ် ကြားလား ..”
ခင်မောင်သိန်း သူ့လက်သီးဆုတ်ကြီးတွေကို လန့်နေသည် ..။ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဗုံးနဲ့ခွဲရဲပေမဲ့ သူ့ကို နှိပ်စက်မှာတော့ ကြောက်နေသည် ..။
အခန်း နံပါတ် ၅ က မိချိုကို လွှတ်ပေးပါတဲ့ ..။ စားပွဲထိုးကောင်လေး လာပြောလို့ ကောင်တာမှာ တီဗွီအသေးလေး ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ ဆိုင်မန်နေဂျာက မိချိုကို လှမ်းကြည့်ပြီး မေးငေါ့ပြသည် ..။ မိချို ဂျာနယ် ဖတ်နေရာက ထရပ်သည် ..။ ချွတ်ထားတဲ့ ခွာအမြင့် ဖိနပ်ကိုစီးပြီး မရှိတဲ့ တင်လေးကို လှုပ်ခါပြီး သန့်စင်ခန်းကို အရင်ဝင်သည် ..။ သန့်စင်ခန်းက ဟိုးဆိုင်နောက်ဘက်ထဲမှာ ..။ အခန်းနံပါတ် ၅ ထဲမှာ လူနှစ်ယောက် ရှိနေသည် ..။
“ စိန်ဝင်းထွန်း ..မင်း အပြင်ထွက်ကွာ …”
“ ဗျာ …”
“ မင်း တော်တော် ဒုံးဝေးတဲ့ကောင်.. ကောင်မလေး လာမယ် ..ငါ နဲ့သူနဲ့ဘဲ ခဏနေမယ်.. မင်း.. အပြင်ထွက်ပေး ”
“ဟုတ် …ဟုတ် …”
အရပ်မြင့်မြင့် နဲ့ တရုတ်ကပြားလိုလူ အခန်းထဲက ထွက်သွားပြီး အရှေ့က ကောင်တာဆီ လျှောက်သွားသည် ..။ မှောင်နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ လူသည် အခန်းထဲ ဝင်လာတဲ့ ကောင်မလေးကို တွေ့လိုက်ရတာနဲ့
“လာ.. မိချို ..ညည်းကို တွေ့ချင်လွန်းလို့ ခေါ်ခိုင်းလိုက်ရတာ . .”
လို့ လှမ်းပြောလိုက်သည် ..။ ကောင်မလေးသည် ဒီလူရဲ့ အနားမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်သည် . .။
“ မိချို . .လက်ပေးစမ်း . .ဒီမှာ စမ်းကြည့်…”
အမှောင်ထဲမှာ ကောင်မလေးရဲ့ လက်ထဲ သူ့တောင်မတ်နေတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို ထည့်ပေးလိုက် သည် ..။ ကောင်မလေးက လိင်တန်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် . .။
“ပူနွေးနွေးကြီးတော့ . . .”
တိုးတိုးလေး လေသံနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရသည် .။
“ဟီး…ဟီး…နင်ကြိုက်လား..မိချို . .”
ကောင်မလေးက ဘာမှ မဖြေဘဲ ဒီလူရဲ့ ခါးပိုင်း နဲ့ ကျောပိုင်းကို လိုက်စမ်းသည် ..။
“ဟားဟား . .ဘာလုပ်တာလဲဟ . .”
“အစ်ကို ခါတိုင်း ပါနေကျဟာကြီး မပါဘူးလား . .”
“ အော်..သေနတ်လား ..အပြင်က ကောင်ဆီမှာ ပါတယ် . .အဟဲ.. ကားထဲမှာလဲ တစ်လက်ရှိတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လဲ..မိချို ကြည့်ချင်လို့လား . .”
“ ပြမယ် . .ပြီးရင်ပြမယ် . .ပုလွေ အရင်ကိုင်လိုက်ဦး …”
ကောင်မလေးသည် လိင်တန်ကို အရင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်ထားရာက ဂွေးစိနှစ်လုံးကို ပြောင်းပြီး ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
“ အို . . .အင်း . . .”
ကောင်မလေးရဲ့ လက်ချောင်းများက ဖွဖွလေး ဆုပ်နယ်နေရာက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ဖျစ်ညှစ်လာသည် ..။
“ဟဲ့..မိချို ..ဖြေးဖြေး.. အို… အား…. အား… ဘာ.. ဘာလို့ ညှစ် …အား . . ”
“ဟင် . .ဒါ . .ဒါ ဘာကြီးလဲ . .”
အေးစက်မာကျောတဲ့ သံမဏိပြောင်း တုတ်တုတ်ကြီး သူ့နားထင်ကို လာထိထောက်လာလို့ မေးလိုက်တဲ့ အသံက တုန်ခါနေသည် . .။ အခန်းထဲမှာက မှောင်နေတာမှ ဘာမှ မတွေ့ရ ..။
“ ဝေမှိုင်းချို ….”
“ဟင်…. မင်း… မင်း………. မင်း ဘယ်သူလဲ . . . . မင်း မိချို မဟုတ်ဘူးလား . . .”
“ မဟုတ်ဘူး . . နင် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့ မူမူ … နင် ရက်ရက်စက်စက် ငါ့ကို ကျင့်ခဲ့တာလေ ..”
“ဟာ…မင်း…မင်း . . . ………..”
“အသံမထွက်နဲ့.. ဆိုင်လင်ဆာ တပ်ထားတယ်.. အသံမမြည်ဘဲ ဦးနှောက်တွေ အဖွေးလိုက် ထွက်သွားမယ် ..”
ဇိကနဲ သူ့ပါးစပ်ကို တိတ်ထူထူကြီး နဲ့ ပိတ်ကပ်လိုက်တာ ခံလိုက်ရသည် ..။
“ နင်.. ငါ ဘယ်လို ခံရတယ်ဆိုတာ ပြန်သိစေမယ်.. ခွေးမသား ..”
စိန်ဝင်းထွန်းသည် ကောင်တာမှာ ထိုင်ပြီး အရက်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်နေသည် ..။ သူ့ဆရာသမား.. ဝေမှိုင်းချိုသည် ကောင်မလေး နဲ့ ဘာတွေများ လုပ်နေသည် မသိ ..။ တော်တော်ကြာနေပြီ ..။ သွားကြည့်ရင်လည်း သူအဆဲခံရဦးမည် ..။
တစ်နာရီ ပြည့်သွားမှ ဆိုင်က မန်နေဂျာက စားပွဲထိုးလေးကို တစ်နာရီပြည့်လို့ အခန်း ဆက်ယူဦးမလား .. သွားမေးခိုင်းတာ စိန်ဝင်းထွန်း တွေ့ရ သည် ..။ ချက်ချင်းဘဲ စားပွဲထိုးလေး အခန်းထဲက ပြန်ပြေးထွက်လာသည် ..။
“ဆရာ.. ဆရာ.. အမြန်လာကြည့်ပါဦး …..”
မန်နေဂျာရော.. စိန်ဝင်းထွန်းရော အခန်းထဲ ပြေးဝင်ကြသည် ..။ မန်နေဂျာက မီးဖွင့်လိုက်သည် ..။
“ ဟယ် …”
မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက မလှပဘူး…။ ဝေမှိုင်းချိုသည် ကိုယ်တုံးလုံးကြီး လဲကျသေဆုံးနေသည် ..။ ပါးစပ်မှာ တိတ်ကပ်ပိတ်ထားသလို လက်နှစ်ဘက်ကို ပူးတုတ်ထားသည် ..။ အဆိုးဝါးဆုံးက ဝေမှိုင်းချိုရဲ့ ဖင်ထဲကို ရာဘာ အချောင်းကြီးတစ်ချောင်း တန်းလန်းကြီး ထိုးထားတာကို တွေ့လိုက်ရသည် ..။
စိန်ဝင်းထွန်းသည် သူ့ဆရာ မသေခင်မှာ မချိမဆန့် ခံစားသွားရသည်လို့ ထင်သည် ..။ ဖင်ပေါက်ထဲကို ရာဘာချောင်း နဲ့ ထိုးဆောင့်နှိပ်စက်ပြီးမှ နားထင်ကို အသံတိတ်သေနတ်နဲ့ တေ့ဖြုတ် ပစ်ခတ်ပြီး သတ်သွားတာ ဖြစ်သည်။ သန့်စင်ခန်းထဲက အိမ်သာထဲမှာ သတိလစ်နေတဲ့ စားပွဲထိုးမလေး မိချိုကို တွေ့ကြရ သည် ..။
စိန်ဝင်းထွန်း .. ဖုန်းထုတ်ကာ အန်တီပင်စီဆီကို ခေါ်လိုက်သည် ..။ အန်တီပင်စီသည် ဝေမှိုင်းချို သတင်းကို ကြားလိုက်ရသောအခါ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားသည် ..။
အန်တီပင်စီ .. အော်သံက တုန်နေသည် ..။ ကြောက်စိတ်ကြောင့် အသံတွေ တုန်ခါနေသည် ..။
နေအုပ်စိန် ပြေးဝင်လာသည် ..။
“အန်တီပင်စီ ..ဘာလိုလဲ…ဘာဖြစ်လဲ …”
“မင်း..မင်းညံ့လို့ … နေအုပ်စိန်.. မင်း ညံ့ဖျင်းမှုတွေ ကြောင့် . .”
“ ဘာဖြစ်လို့လဲ …ကျနော် ဘာလုပ်မိလို့လဲ….”
“ မင်းကို ဆော်ပြီး လစ်ပြေးသွားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး မူမူ… အခု ဝေမှိုင်းချိုကို သတ်သွားပြီ …”
“မဗျာနဲ့.. အခု လူစုပြီး ဒီ ဆူးခက် (ခေါ်) မူမူကို ပိုက်စိပ်တိုက် ….. ရှာပေတော့ … တွေ့တဲ့နေရာမှာ အသေ ပစ်သတ်ပေတော့ . . .”
“ ဟုတ်…ဟုတ်ပြီ..အန်တီ ပင်စီ . . .”
ရုံးအဆောက်အဦးထဲမှာ လေအေးစက်နဲ့ သန့်ရှင်း သားနားသော ကက်ဖတေးရီးယား ရှိပါရက်နဲ့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းသားဘဝကလို လမ်းဘေးဆိုင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရမှ နေပျော်သော နေပိုင်စိုး နဲ့ ရဲလွန်း သည် သူတို့ ရုံးအပြင်က လဘက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ ထိုင်နေကြသည် . .။ နေပိုင်စိုးက ပဲထပ်တရာကို ပလုပ်ပလောင်း စားလိုက် .. လဘက်ရည်ကို သောက်လိုက် လုပ်နေသည် ..။
“နေပိုင် .. အိန္ဒြေ ပျက်လှချည်လား ..ဖြေးဖြေးစားလည်း ရပါတယ်ကွာ ..”
“ မင်း မသိပါဘူးကွာ .. ငါ မနေ့က နေ့လည်စာ စားပြီးကတည်းက ခုထိ ဘာမှ မစားရသေးလို့ …”
ဒီအချိန်မှာ သူတို့ ရုံးရှေ့ကို ကားတစ်စီး ထိုးဆိုက်လာ သည် ..။ နေပိုင်စိုး နဲ့ ရဲလွန်း ထိုင်နေသော နေရာကနေ လှမ်းမြင်နေရသည် ..။ ကားပေါ်က ခြေထောက်လှလှလေး အရင်ဦးဆုံး ထွက်လာ သည် ..။ ပြီးတော့ မိန်းမလှလှလေး တစ်ယောက် ထွက်လာသည် ..။
စူးမ ဆိုလို့ နေပိုင်စိုး …ဖျတ်ကနဲ လှည့်ကြည့် သည် ..။ စူးမသည် ရုံးထဲကို ဝင်သွားသည် ..။ နေပိုင်စိုးက ..
“ညက ငါ့ဆီ ဖုန်းဆက် ပြောပြတယ် ..စစ်ဆင်ရေး က ပြန်လာတယ်တဲ့.. ဒီနေ့ ရုံးကို သတင်းလာပို့မယ်တဲ့ . .”
လို့ ပြောရင်း . .လဘက်ရည် ကို မော့သောက်ပြီး …
“ရဲလွန်း ငါရုံးထဲ ဝင်လိုက်ဦးမယ် ..အဟီး .. စူးမနဲ့ မတွေ့တာကြာပြီ ..”
လို့ ပြောရင်း ..သူ့တိုက်ပုံ အိတ်ထဲ လက်နှိုက်နေလို့ ရဲလွန်းက ..
“ သွား..ရတယ်..ငါ ရှင်းလိုက်မယ် . .”
လို့ ပြော သည် ..။
နေပိုင်စိုး တဖက်လမ်းကို ကူးပြီး ရုံးထဲ ဝင်သွားတာ သူကြည့်နေတုန်း .. ဆိုင်ထဲကို လူတစ်ယောက် ဝင်လာသည် ။
“ဟေး… တဇောက်ကန်း ..မတွေ့တာကြာပြီ ..မောင်ရင် ..မဲဆောက်ဖက် ရောက်နေတယ် ကြားတာ …”
“ဟား..ကိုကျွဲ .. လာ..လာ.. ဘာသောက်မလဲ …”
သူတို့က ကိုကျွဲလို့ ခေါ်သော မျိုးသန့်ဦး .. ရဲလွန်းဘေးမှာ ဝင်ထိုင်ပြီး လဘက်ရည်မှာသည် ..။
“ကိုကျွဲ ..အခု ဘယ်ယူနစ်မှာလဲ ..”
“ ဒီမှာဘဲ စီတီယူမှာဘဲ…”
“ကြားလိုက်ပါတယ်.. မောင်ရင် အလီ ဆိုတဲ့ ကောင်ကို အမှုစစ်တာ .. ကြည့်လဲ လုပ်ဦး.. ခေတ်တွေ စနစ်တွေ ပြောင်းနေပြီ ..”
စီတီယူ ဆိုတာက ကောင်တာ တဲရိုရစ်စ် ယူနစ်ကို အတိုကောက်ခေါ်တာ ဖြစ်သည် ..။
“ ဒီလိုဘဲ ကိုကျွဲရေ ..တိုင်းပြည်ထဲ အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲချင်တဲ့ လူတွေကိုတော့ လူကြီးလူကောင်းလို ကျုပ်တို့ မဆက်ဆံနိုင်ဘူးဗျာ …”
“ အေးပါ..ဒါကြောင့် မောင်ရင့်နာမည်လဲ တဇောက်ကန်း လို့ ခေါ်နေကြတာပေါ့ …”
“ ဒါနဲ့ ကိုကျွဲတို့ဆီက ယမုံဆိုတဲ့ အလန်းလေး .. ကျုပ်ကြိုက်တယ်ဗျာ …”
“ဟေး .. အဲဒါလေးက မလွယ်ဘူး ..ဒို့ ယူနစ်မှာ သူ့နာမည်အရင်း ယမုံလင်း ပျောက်ပြီး နဂျစ်တူး လို့ ခေါ်ကြတယ် .. သူက ယောင်္ကျားတွေနဲ့ တတန်းထဲ အကုန်လုပ်တာ ..မင်း ..နဂျစ်တူးနဲ့ ဘယ်မှာ ဆုံလို့တုန်း..”
“မန်းလေးကွင်းမှာ ဟိုင်းဂျက် လေယာဉ် ဆင်းလာမယ် ဆိုလို့ ကျုပ်တို့ ပြေးကြတော့ သူက ဆွပ်တီးမ် က စနိုက်ပါအနေနဲ့ ပါလာတာ ..ကျုပ် ကြွေသွားတယ် ..ဒီဇိုင်းက မိုက်လို့ .. ဟီး….”
ကိုကျွဲသည် တစ်ခါထဲ မှာလိုက်သော နန်းကြီးသုတ် နှစ်ပွဲကို ဆက်တိုက် တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ စားနေ သည် ..။ ရဲလွန်းနဲ့ ကိုကျွဲ .. မြိတ်နဲ့ ကော့သောင်ဘက်မှာ စစ်ဆင်ရေးကြီး တစ်ခုမှာ အတူတူ လုပ်ကိုင်ကြရင်း ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ဖြစ်လာကြသည်..။ နက်ပြောင်နေသော အသား .. ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေက ကျွဲကြီး… ကိုကျွဲ.. ကျွဲပေါက် .. စသဖြင့် ခေါ်ကြရင်း ..နာမည်ရင်း မျိုးသန့်ဦး ပျောက်ပြီး လူတိုင်းက ကိုကျွဲလို့ ခေါ်နေကြတော့တာ ဖြစ်သည် ..။
“ မောင်ရင့် ဘော်ဒါ နေပိုင်စိုး တစ်ယောက်ကော .. ဒီရုံးမှာဘဲလား …”
“ အင်း ..ခုလေးတင် ထသွားတာ ..သူ့ဆော်လေး စူးမ တွေ့တာနဲ့ ရုံးထဲ ဝင်လိုက်သွားတယ် . . .”
“ စူးမ ဆိုတာ ..ဟို .. အနုအရွလေးလား …”
“ အင်း ..ဟုတ်တယ်.. ကိုကျွဲ ဆုံဘူးလို့လား …”
“ ဆုံဘူးတာပေါ့ ..ငါ့မှာ စူးမက ကနွဲ့ကရနဲ့ နုလှနေလွန်းလို့ .. တခါတလေ ..သူ့အတွက် စိုးရိမ်မိတယ် ..မိန်းမချောလေးတွေ ..ဒို့လုပ်နေတဲ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း အလုပ်တွေထဲ ..မလွယ်ပါဘူးကွာ ..ဘာကြောင့်များ ..သူတို့ကို ခိုင်းသလဲ မသိပါဘူး ..”
ရဲလွန်း ကိုကျွဲ ပြောတာကို သဘောပေါက်သည် ..။ စူးမလို နုနုရွရွလေးသည် ဒုစရိုက်လောကက မိုက်ပေ့ဆိုတဲ့ လူမိုက်လူဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့က လွယ်လှမည် မဟုတ် ..။
“ နယ်စပ်မှာ…တကယ့်ကို ရွတ်ထေတဲ့ အကောင်တွေကို ဒို့ဝင်ဖမ်းတာ ..သေမထူး နေမထူးတွေ ဆိုတော့ ဒို့ကို ခံချကြတာပေါ့ကွာ ..ကွန်ဖူးသမားတွေ ကွ.. ငါ့ကိုငါ ကြမ်းလှပြီ ထင်ခဲ့တာ ..ငါတောင် အလူးအလဲ ခံရတယ် .. စူးမလဲ ပွဲဦးထွက် တော်တော် တုန်လှုပ်သွားတယ်ကွ …”
ကိုကျွဲသည် မလိုင်ဖတ်တွေ ဝေ့နေတဲ့ လဘက်ရည်ပျစ်ပျစ် တစ်ခွက်ကို ရှူးကနဲ မော့သောက်လိုက် သည် ..။ ရဲလွန်း ထိုင်ရာက ထသည် ..။
“ကိုကျွဲ ..ကျနော် ဒိုးတော့မယ် ..မနက်က ဒုချုပ် ခေါ်ပြီး အလုပ်တစ်ခု ပေးတယ် …လှုပ်ရှားလိုက်ဦးမယ် …”
ကောင်တာမှာ ပိုက်ဆံပေးရင်း ..ရဲလွန်း .. ငါးသုံးလုံး စီးကရက်တစ်ဘူး ဝယ်လိုက်သည် ..။ ကိုကျွဲ စားပွဲနားက ဖြတ်ကာ ဆိုင်ပြင်ကို လျှောက်ထွက်ရင်း ..
“ ကိုကျွဲ.. အားလုံး ရှင်းပြီးပြီ .. နောက်တော့ တွေ့ကြမယ် …”
လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်သည် ..။
“ကောင်းပြီ ..တဇောက်ကန်း ရေ ..ဆီးယူး…”
အန်တီပင်စီ နေအုပ်စိန်လည်း ထွက်သွားရော ..ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည် ..။ သူမ အထက်ကို သတင်းပို့ရမည် ။
“ ဘော့စ် .. ပင်စီ ပါ…..”
“ ဝေမှိုင်းချို အသတ်ခံရတာကို ပြောမလို့ မဟုတ်လား …”
“ ဟင်…ဘော့စ် သိပြီးနေပြီလား ..”
“ အင်း ..ပင်စီ ..ပင်စီ …”
“ရှင် …..ဘော့စ် …”
“ ဒါတွေ အားလုံး..ပင်စီ့မှာ တာဝန်ရှိတယ် ..ပင်စီ ..”
“ ဟို..ဟို ….”
“ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေ ..လုပ်မနေနဲ့..ပင်စီ ..ဒီ မူမူ ဆိုတဲ့ အစိုးရ စပိုင်မကို သိသိချင်း ရှင်းပစ်ဖို့က ပင်စီ့တာဝန်.. ကိုယ့်အလုပ်ကို လုပ်မှပေါ့.. သေနတ်နဲ့ ဒိုင်းကနဲ ပစ်သတ်လိုက်ရင် ပြီးတဲ့ဟာကို ဘယ့်နှယ် မုဒိန်းကျင့်ခိုင်းရတယ်လို့ကွာ.. ပင်စီ.. ပင်စီ .. တော်တော်လဲ ခက်တယ် …ကဲ.. အခု လာခဲ့ ..”
“ ဘယ်…ဘယ်ကို လာရမလဲ ..ဘော့စ် …”
“ စခန်း ၂ ကို … အခု ချက်ချင်းလာ ..”
ဘော့စ် အသံက ခက်ထန်လွန်းတာမို့ ပင်စီ တုန်သွားသည် ..။ အလွန်ရက်စက်သော ဘော့စ်အကြောင်း ပင်စီသိလို့ ..။ ပင်စီကလည်း ပင်စီဘဲ …။ သူမ မသိစိတ်က ဒီဆူးခက်ဆိုပြီး သူတို့ထဲ ဝင်လာတဲ့ ဒီမူမူဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက ချောလွန်းလို့ ကြိတ်ပြီး မနာလို ဖြစ်နေမိသလား မသိ ..။ သူမကို အတင်း မုဒိန်းကျင့်ခိုင်းခဲ့သည် ။
ပင်စီသည် သူတို့ အဖွဲ့ကြီးမှာ အဖွဲ့ငယ်လေးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အနက်က တစ်ခုသော အဖွဲ့ငယ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ် သည် ..။ အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တုတ်တုတ်ထွားထွား နဲ့ အန်တီကြီးပုံပေါက်နေလို့ အန်တီပင်စီလို့ ခေါ်ကြ သည် ..။ တကယ်တမ်း အသက်တော့ သိပ်မကြီးသေး ..။
သူတို့ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေသည် အဆက်ကောင်း.. ပေါက်ရောက်သည်လို့ ပင်စီ သိထားသည် ..။ အစိုးရဘက်မှာလည်း အဆက်အသွယ်တွေ ရှိနေသည်လို့ သိရသည် ..။ အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာ ဘယ်ခေတ်မဆို ရှိကြစမြဲဘဲလေ ..။ ငွေနဲ့ပေါက် စည်းရုံးတဲ့အခါ ဖောက်ပြန်ပြီး စားဝတ်နေရေး မပြေလည်တာ အကြောင်းပြပြီး ..ဒုစရိုက်သမားတွေရဲ့ အိတ်ကပ်ထဲ ရောက်ကုန်သည် ..။
ထို့ကြောင့် ပင်စီလို မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းက ခေါင်းဆောင်ငယ်တစ်ယောက်က .. ” ပုလိပ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံပေးရင် ပါးရိုက်ပြီးတောင် ခိုင်းလို့ရတယ် ..” လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို စော်ကား ပြောဆိုလေ့ရှိသည် ..။
ဘော့စ်ဆီကို ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်စွာနဲ့ ပင်စီ ရောက်သွားသည် ..။ စခန်း ၂ ဆိုတာက ရန်ကုန် စက်မှုဇုံက အဆောက်အဦးကြီး တစ်ခု ဖြစ်သည် ..။ အပြင်ဘန်းမှာက စက်ရုံတစ်ခုရဲ့ ဂိုဒေါင်ကြီး တစ်ခုအနေနဲ့ ဘန်းပြထားသော သူတို့ရဲ့စခန်း တစ်ခု ဖြစ်သည် ..။ ဂိတ်ပေါက်ဝမှာ မျက်နှာမာမာနဲ့ အပြာရင့်ရောင် ယူနီဖောင်းဝတ် လူတစ်ယောက် ရှိနေသည် ..။
“ ဘော့စ် ခေါ်ထားလို့ ..”
ဘာမှ စကားပြန်မဖြေပေမဲ့ ခြံတံခါးကို ဖွင့်ပေးသည် ..။ ပင်စီ သူမရဲ့ ဗောက်စ်ဝက်ဂွန်း ဂျက်တာ ကားလေးကို ခြံကြီးထဲကို မောင်းဝင်သွားပြီး.. ဂိုဒေါင်ကြီး အနောက်အထိ ကွေ့ပတ် မောင်းဝင်သွားလိုက်သည် ..။ အဆင်သင့် ဖွင့်ထားသော တံခါးကြီးထဲ မောင်းဝင်လိုက်သည် ။ သူမ ကားလေး ဝင်လိုက်ပြီးတာနဲ့ ဂိုဒေါင်တံခါးကြီး ပြန်ပိတ်သွားသည် ..။ ကားပေါ်က အဆင်း .. လူတစ်ယောက် ရှိနေသည် ..။
“ ဘော့စ် အပေါ်ထပ်မှာ ရှိတယ် ..လှေခါးက တက်သွားပါ …”
သူလဲ မျက်နှာက မာကျော ခက်ထန်လှသည် ..။ သံလှေခါးလေး အတိုင်း အပေါ်ထပ် တက်ခဲ့သည် ..။ တံခါး ဆွဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အဲကွန်း လေအေးစက်ကို ခံစားလိုက်ရ သည် ..။ အပေါ်ထပ်က အောက်ထပ် နဲ့ တခြားစီ ဖြစ်သွားသည် ..။ လင်းထိန်နေသော မီးတွေ ထွန်းထားပြီး တောက်ပြောင်လက်နေတဲ့ သစ်သားကြမ်းနဲ့ ဆေးအဖြူ အသစ် သုတ်ထားသော နံရံများနဲ့ ..။
ဘော့စ် ရဲ့ အခန်းဝကို ရောက်တော့ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း မိန်းမတစ်ယောက် တံခါးဝမှာ ရှိနေသည် ..။ ဒီမိန်းမက ဘာမပြောညာမပြော ပင်စီ့ တကိုယ်လုံးကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ပြီး လက်နက်ရှာသည် ..။ မိန်းမချင်း ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့လက်ဖဝါးကြီးတွေ နဲ့ အကိုင်အပွတ်ခံရတာ ပင်စီ ကျောချမ်းသွားသည် ..။ ပေါင်ကြားဂွဆုံနေရာ နဲ့ တင်သားတွေအကြား ပွတ်သပ်ဖို့ မလိုအပ်ဘူး.. ပင်စီ ထင်မိသည် ..။
“ ရပြီ ..ဝင်တော့ ..”
ပင်စီ တံခါး ဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ ဘော့စ်ထိုင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ အလုပ်ခန်းကျယ်ကြီးထဲကို ရောက်သွား သည် ..။ စားပွဲ အကြီးစားကြီးနောက်မှာ ဘော့စ် ရှိနေသည် ..။ ရွှေရောင်ကိုင်း မျက်မှန်လေးထောင့်လေးရဲ့ အနောက်က စူးရှတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ သူမ ဝင်လာတာကို ကြည့်နေသော ဘော့စ်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ ပင်စီ တကိုယ်လုံး တုန်သွားသည် ..။ သူ့လက်အောက်မှာ အကြာကြီး လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဘော့စ်သည် ဘယ်လောက် ရက်စက်သည် ဆိုတာကို ပင်စီ ကောင်းကောင်း သိသည် ..။
“ လာ..ပင်စီ ..ဒီကို ..”
သူရှိနေတဲ့ စားပွဲကြီး ရှေ့ကို ပင်စီ ရောက်သွား သည် ..။ ပင်စီ့ဒူးတွေ မခိုင် ဖြစ်နေသည် ..။ ဘော့စ် နဲ့ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲ ..။ မျက်စိကို အောက်စိုက်ထားမိသည် ..။
“ ကိုယ့်အပြစ် ကိုယ်သိတယ် မဟုတ်လား ..ပင်စီ ..”
“ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် လုပ်ပြီး အရမ်းပေါ့ဆတယ် ..ထောက်လှမ်းရေးမ လွတ်သွားတာ နဲ့ ဒို့စခန်းတချို့ကို ဆုံးရှုံးသွားတယ် .. ဒီကောင်မ သိထားတာတွေ အားလုံး ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ရတယ် ..သူသတ်လို့ ဝေမှိူင်းချို အပါအဝင် ဒို့အဖွဲ့ဝင်တွေလဲ သေ ..ငွေတွေလည်း ဆုံးရှုံး .. ပင်စီ.. မင်း ပေါ့ဆတာ အတွက် ..ငါ့ ဘတ်ဂျက် တော်တော် ထိတယ် .. ငါ မင်းနေရာမှာ တခြားတပည့်ဆိုရင် တစ်ခါထဲ ချက်ချင်း ပစ်သတ်လိုက်မိမှာဘဲ … အင်း … မင်း ကိုကျတော့ .. ငါ .. ငါ ပစ်သတ်ဖို့ ဝန်လေးနေတယ် … ပင်စီ .. ဘာကြောင့်လဲ သိလား …”
“ ငါ့နားကို လာစမ်း ..”
ကျွန်းသား စားပွဲကြီးကို ကွေ့ဝိုက်ပြီး ဘော့စ် ထိုင်နေတဲ့ နားကို ပင်စီ လျှောက်သွားလိုက်သည် ..။ ရုံးခန်းကျယ်ကြီးသည် လေအေးစက်သံ သဲ့သဲ့မှအပ တိတ်ဆိတ်နေသည် ..။
“ ပင်စီ ..”
“ ရှင် ..”
“ မင်းကို ဘယ်လိုမျိုး အပြစ်ဒဏ် ပေးရမလဲ ..”
“ ဘော့စ် ပေးချင်တာပေးပါ ..ပင်စီ ခံပါ့မယ်..”
ဘော့စ် သည် ထိုင်နေရက်က ပင်စီ့ ခါးလေးကနေ သူ့အနားကို ဆွဲခေါ်လိုက် သည် ..။ ပြီးတော့ လေသံတိုးတိုး နဲ့ ..
“ ဟိုတခါ မင်းနဲ့ ငါ ဖြစ်ပျက်ကြပြီးတဲ့နောက် မင်း ဘယ်ကောင်နဲ့ ဖြစ်သေးလဲ..”
လို့မေးသည် ..။ ပင်စီ့ ရင်ထဲ နွေးကနဲ ခံစားလိုက်ရ သည် ..။
“ ဘယ်သူနဲ့မှ ထပ်မဖြစ်ပါဘူး ..ဘော့စ်..”
“ ဟင် .. ဟုတ်ရဲ့လား.. ကြာနေပြီဘဲ.. မင်း .. သွေးသားတောင့်တတာ မဖြစ်မိဘူးလား .. မညာနဲ့နော် ..ပင်စီ..”
“ မညာပါဘူး ..သွေးသားဆန္ဒတော့ ဖြစ်မိပါတယ် ..ဘယ်.. ဘယ်သူနဲ့မှ… မ…. မ… မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.. ဘော့စ် ..”
“ မင်း..ဆာမနေဘူးလား ..ပင်စီ ..”
ပင်စီ ဘာမှ ပြန်မဖြေ ..။
“ လာ..ဒူးထောက်ထိုင်လိုက် …”
ပင်စီ ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ ဘော့စ် ထိုင်နေတဲ့ ရှေ့ ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်သည် ..။ ကားထားတဲ့ ဘော့စ်ရဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကြားထဲ သူမ ရောက်သွားသည် ..။ သူမကို ဘာလုပ်ခိုင်းတော့မည်ကို ပင်စီ သိလိုက်ပြီ ..။ အင်း..ဒီလို အပြစ်ဒဏ် ဆိုရင် တော်ပါသေးရဲ့..။ ဘော့စ်ရဲ့ ညာလက်က သူ့ဘောင်းဘီက ဇစ် ကို ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲချနေသည် ..။ ပင်စီ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဘော့စ် ဘောင်းဘီ အရှေ့ပေါက်က ထွက်လာမဲ့ဟာကို ကြည့်နေသည် ..။
အို ..။ လုံးပတ်တုတ်တုတ် လိင်တန်ကြီးကို သူ ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ..။ ပင်စီ့ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်း အခုန် မြန်သွားရသည် ..။ ဒီလိင်တန်ကြီး နဲ့ ပင်စီ အရင်တခါ ကြုံဘူးခဲ့သည် ..။ တကယ့် စံချိန်မှီကြီး ..။ သူ့ထိပ်က ဒစ်ဆိုတဲ့ ထိပ်ဖူးကြီးက ကားကား ကောက်ကောက်ကြီးနဲ့ ပင်စီ့ အဖုတ်ကို မကြာခင် ထိုးသွင်းတော့မဲ့ဟာကြီးလို့ တွေးမိလိုက်တာနဲ့ ကြက်သီးတွေ ဖြန်းကနဲ ထသွားရသည် ..။ ဘော့စ်က ဘာလုပ်လို့ မပြောပေမဲ့ သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ခိုင်းတယ် ဆိုကတည်းက ဘာလုပ်ရမယ် ..ဘာလုပ်စေချင်တယ် ဆိုတာ ပင်စီ သဘောပေါက်သည် ..။
ဘော့စ်သည် လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်က ပင်စီ့ကို တည မူးမူးနဲ့ ဖြုတ်ခဲ့သည် ..။ ဘော့စ်သည် သူတို့အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့ အသက်က သူ့ထက်တောင် ငယ်သေးသည် ..။ ပိန်ပါးကျစ်လစ်ပြီး အားကစား လိုက်စားသူမို့ တကယ် ဖြုတ်နိုင်တဲ့လူ ..။ အဲဒီတုန်းက ပင်စီ့ကို မူးနေတာတောင် အပီဆွဲတာ ..။ တိတိပပဆိုရင် မိုးအလင်း တညလုံး ငါးချီ ဖြုတ်ခဲ့တာ ..။ ပင်စီ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြီးခဲ့ရ သည် ..။ နောက်ပိုင်း ပင်စီ့ကို လှည့်မကြည့်တော့ပြန်ဘူး ..။ ဘော့စ်မှာက ဆော်ငယ်ငယ်လေးတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသည် .။
ဘော့စ်ရဲ့ ဒစ်ပြဲပြဲ နဲ့ လိင်တန်ကြီးကို ပင်စီ ဖမ်းငုံလိုက်သည် ..။ ဘော့စ် နှုတ်ဖျားက အင်း….. လို့ ညည်းလိုက်တဲ့ အသံကို ပင်စီ ကြားမိလိုက်သည် ..။ ပင်စီ… ဆူးခက် (ခေါ်) မူမူ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြစ်ရှိတာကြောင့် ဘော့စ်ကို အကောင်းဆုံး ပြုစုပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမို့ ဘော့စ် လိင်တန်ရဲ့ ဒစ်ကြားကို လျှာနဲ့ ထိုးကလိပေးလိုက်သည် ..။
“အိုး…ကျွတ်..ကျွတ် …အား …ဟား…….”
ဘော့စ်သည် ဘယ်လောက် ထိမိသွားသလဲ မသိ ..။ ယောင်ယမ်းပြီး ပင်စီ့ခေါင်းကို ဖမ်းကိုင်လိုက် သည် ..။ ပင်စီလည်း အားကြိုးမာန်တက် ဘော့စ် လိင်တန်ချောင်းကို စုတ်ပေးသည် ..။ ပင်စီရဲ့ လျှာက ဘော့စ်ရဲ့ လိင်တန်ထိပ်ဖျားကို လှိမ့်ကာလှိမ့်ကာ ယက်လိုက် ထိုးလိုက် လုပ်ပေးနေသလို ဘော့စ်ရဲ့ ဥနှစ်လုံးကိုလည်း ဖွဖွလေး ပွတ်သပ် ပေးနေသည် ..။
“အား …. ဟား…. အားဟား…. ကောင်းတယ်.. ကောင်းတယ် …. ပင်စီ ..အဝတ်တွေ ချွတ်စမ်း
မင်းကို ငါ ကြည့်ချင်တယ် ….”
ပင်စီလည်း စုပ်တာကို မရပ်ဘဲ ပါးစပ်က စုပ်နေစဉ် လက်တွေက သူမ အဝတ်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ချွတ်ပစ်ရသည် ..။ ပထမဆုံး ပင်စီရဲ့ ဖြူဖွေး ဖွံ့ထွားပြီး တင်းမာနေတဲ့ စနေနှစ်ခိုင်သည် နို့သီးထိပ်ခေါင်း နီနီလေးများနဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေတာကို ဘော့စ် မြင်လိုက်ရပေသည် ..။
“အိုး ..ပင်စီ..ရပ်တော့ ..ငါ..ငါ..ပြီးသွားလိမ့်မယ် …”
ပင်စီက စုပ်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး ထမိန်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ..။ ပင်တီပါးပါးလေးမှအပ ပင်စီ့ တကိုယ်လုံး ဗလာကျင်းနေပြီ..။ ပင်စီ့ စိတ်တွေ ကြွထလာနေသည် ..။ ဘော့စ်ရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို စုပ်နေရကတည်းက သူမ အင်္ဂါစပ်မှာ အရေတွေ တအားစိုရွှဲနေရသည် ..။ ပင်တီကို ပင်စီ လိပ်ပြီး ချွတ်ချ သည် ..။ ပေါင်ကြားက အမွှေးစုစု နဲ့ ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ကြီးကို တွေ့လိုက်သော ပင်စီ့ဘော့စ်မှာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီးကို ရမက်ပြင်းတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်ပြီး…
လို့ ပြောလိုက်သည် ..။ ပင်စီလည်း ဘော့စ် ခိုင်းတာကို ချက်ချင်းဘဲ လုပ်လေသည် ..။ ဘော့စ်ရဲ့ အလုပ်စားပွဲကြီးမှာ လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးလိုက်သည် ..။ ဖြူဖွေးတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက ကုန်းလိုက်လို့ ပိုပြီး ကားကော့နေသည် ..။ ဘော့စ်သည် ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဘဲ ဆုပ်ညှစ်ကိုင်တွယ်လေ သည် ..။ ဘော့စ်ရဲ့ လိင်တန်ထိပ်ပေါက်က အရေကြည်တွေဟာ လိင်တန်တလျှောက် စီးကျလို့နေသည် ..။
ဘော့စ်သည် အချိန်ဆိုင်းမနေဘဲ ပင်စီရဲ့ တင်ပါးတွေကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲကို သူ့လိင်တန်ကို ထိုးသွင်းလေသည် ..။ လုံးပတ်တုတ်တုတ် အတန်ကြီး ဗျိကနဲ ဝင်လာတာကို ပင်စီ တင်ပါးကြီးတွေကို ကော့ပေးပြီး ခံလေရာ ပင်စီ့အဖုတ် အတွင်သားနုနုတွေကို မညှာမတာ ပွတ်တိုက်သွားလို့ တကိုယ်လုံး ကျင်တုန်သွားရ သည် ..။ ပင်စီ့နှုတ်ဖျားက အင်း….ဟင်း….. လို့ အသံထွက်လာသည် ..။
ဘော့စ်က လိင်တန်တဆုံး ထိုးသွင်းလိုက်တာမို့ ဘော့စ်ရဲ့ အမွှေးကြမ်းကြမ်းတွေဟာ ပင်စီ့တင်ပါးကြီးတွေနဲ့ ထိကပ်နေရသည် ..။ သူ့လိင်တန် တစ်ချောင်းလုံး ပင်စီ့အထဲမှာ အပြည့်အသိပ်ကြီး ရောက်နေသည် ..။ ဘော့စ်က ဆက်မလုပ်ဘဲ တဆုံးထိုးထည့်ထားပြီး ပင်စီ့ စအိုပေါက် ညိုညိုလေးကို စပြီး ရန်ရှာလေပြီ ..။ ဘော့စ်ရဲ့ လက်မက စအိုပေါက်လေးကို ကလိနေသည် ..။
ပင်စီ ရင်ထဲ ထိတ်သွားသည် ..။ ဘော့စ် ပင်စီ့ ဖင်ကို ချမလို့လားမသိ ..။ ဒီလောက် တုတ်လဲတုတ် ရှည်လဲရှည်တဲ့ လိင်တန်ကြီးနဲ့ ဖင်အချခံလိုက်ရရင် ပင်စီ့ ဖင်ပေါက်လေးတော့ ကွဲပြီ.။ ဆူးခက်ခေါ် မူမူကို ဝေမှိုင်းချိုတို့ နဲ့ မုဒိန်းကျင့်ခိုင်းတာ အခုသူမကို ဘော့စ်က ဖင်ဖွင့်မယ် လုပ်တော့မှ ပင်စီ ကိုယ်ချင်းစာမိသည် ..။ ချက်ချင်းကို ပြန်ခံရတာဘဲ ..။ ဘော့စ် ပြုသမျှ ပင်စီ နုရမှာ ..။ ဘော့စ်က တစ်ချက်ချင်း မှန်မှန်လေးစပြီး အဖုတ်ကို လုပ်ရင်း ဖင်ပေါက်ကို ထိုးဆွ ကလိနေသည် ..။
“ပင်စီ ..မင်း ဖင်ခံဘူးလား ..”
“ မ…မ…မ..ခံဘူးဘူး ….”
“ငါမင်းကို ဖင်ချမယ် ….”
ဘော့စ်ရဲ့ လက်မနဲ့ ထိုးဆွပေးနေတာ နာကျင်ပေမဲ့ ကျိတ်မှိတ် ခံနေရသည် ..။ ဘော့စ် ထိုးဆောင့်တာတွေ မြန်လာသည် ..။ အရသာ ထူးကဲလှတာကြောင့် ပင်စီ သဘောကျမိသည် ..။ အရေတွေ တအားရွှဲနေတာကြောင့် တဖတ်ဖတ် အသံတွေ ညံနေသည် ..။
“ ဟုတ်..ကောင်းတယ် ဘော့စ် ..”
“ မြန်မြန် ဆောင့်မယ် ..”
“ ဟုတ်…ဟုတ် ..”
တဖန်းဖန်း တဖတ်ဖတ်နဲ့ ဘော့စ် ဆောင့်ဆောင့်ထည့်တိုင်း .. ပင်စီ့ တင်ပါးကြီးတွေ တုန်ခါသွားနေ သည် ..။
“အာ့…အား…..အား ….ဆောင့်…ဆောင့်..တအား…တအား …..”
ပင်စီ ပြီးသည်အထိ ဘော့စ်က မနားတမ်း ဆောင့်ပေးပြီး… လိင်တန်ကို ပင်စီ့ အဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ..။
“ ကဲ ဖင်လိုးရအောင် ..”
ဘော့စ် ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ပင်စီ တုန်သွား သည် ..။ ဘော့စ်ရဲ့ လက်မက ပင်စီ့ အဖုတ်ထဲမှာ
ရှိနေသည် ..။ ဘော့စ်ရဲ့ လိင်တန် ထိပ်ဖူးကြီး ပင်စီ့ စအိုပေါက်ဝကို လာတေ့လိုက်သောအခါ ပင်စီ ကြက်သီးတွေ ဖြန်းကနဲ ထသွားရလေသည် ..။
ဦးသောင်းထိုက်စိုးသည် ကားမောင်းနေရင်း အိမ်ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ..။ ဇနီးဖြစ်သူ ထမင်းပွဲပြင်ထားနိုင်ရန် အိမ်နား မရောက်ခင် ကြိုတင် ဖုန်းခေါ်ထားတာက သူ့အကျင့်..။ ဇနီး ဖြစ်သူက ထမင်းပွဲ အဆင်သင့် ပြင်ထားသောအခါ မစားသေးဘဲ စောင့်နေသော ဇနီးနဲ့အတူ ညစာကို အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း စားနေကျမို့ ယခုလဲ ဖုန်းခေါ်နေတာ ဖြစ် သည် ..။ ဇနီးဖြစ်သူ ဘယ်ရောက်နေလဲ ..။ ဖုန်းမထူး ..။ သုံးကြိမ်ခေါ်ပေမဲ့ မထူး ..။
သူ့အိမ်ရှေ့ကို ရောက်လာသည် ..။ အိမ်ထဲမှ မီးရောင်ကို တွေ့နေရသည် ..။ ကားဂိုဒေါင် တံခါးကို ဖွင့်တဲ့ အဝေးထိန်းခလုတ်ကို နှိပ်သည် ..။ တဒိဒိနဲ့ ဂိုဒေါင်တံခါး ပွင့်တက်သွားတော့ သူကားကို ဂိုဒေါင်ထဲ မောင်းသွင်းလိုက်သည် ..။ ဂိုဒေါင်တံခါးကို ပြန်ပိတ်သည် ..။ ကားစက်ကို သတ်ပိတ်ပြီး ကားပေါ်က ဆင်းသည့်တိုင် အိမ်ကြီးက တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေသည် ..။
ဖုန်းခေါ်မရတောင် ဂိုဒေါင်တံခါးပွင့်သံကြားပါက ဇနီးဖြစ်သူ ရောက်လာဖို့ကောင်းသည် ..။ ကားပေါ်က ဆင်းသက်ပြီး သူ့ ဆမ်ဆိုနိုက် သေတ္တာပြားလေးကို ကားနောက်ခန်းထဲက ထုတ်ယူလိုက်သည် ။ စိတ်ထဲမှာ မသိုးမသန့် ဖြစ်လာသည်..။ မသင်္ကာ ဖြစ်လာသည် ..။ အိမ်ထဲကို တစ်ယောက်ယောက် ရောက်နေသလား ..။ ဇနီးဖြစ်သူ ဘယ်မှာလဲ …။
ဖျတ်ကနဲ သူ့တိုက်ပုံအောက်မှာ ပုခုံးစလွယ်အိတ်နဲ့ ထည့်ထားသော သူ့သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ..။ ဂိုဒေါင်ကနေ အိမ်ထဲကို ဝင်တဲ့ တံခါးကို သော့နဲ့ ဖွင့်ဝင်သည် ..။ မီးလင်းနေသော မီးဖိုခန်းထဲကို သူရောက်ရှိသွားသည် ..။ ဘယ်သူမှမရှိ ..။
“ တင်တင် ..တင်တင် ..ဘယ်ရောက်နေလဲ …”
ဇနီးဖြစ်သူ တင်တင်နွယ့်ကို ခေါ်ကြည့်သည် ။ မထူး ..။ သေနတ်မောင်းကို အနောက်ကို ကလစ်ကနဲ ဆွဲတင်လိုက်သည် ..။ ဒီအချိန်မှာ မှောင်နေတဲ့ ဧည့်ခန်းကြီးထဲက အနီရောင် မီးအတန်းလေးတစ်ခု ဖတ်ကနဲ ပေါ်လာလို့ သူက သေနတ်ကို အဲဒီနေရာဘက်ကို ထိုးချိန်လိုက် သည် ။ လေဆာ အလင်းတန်း အနီလေး သူ့နဖူးတဲ့တဲ့ကို တန်းထောက်ထားနေသည် ..။
“လက်ထဲက သေနတ်ချလိုက် ..ခင်ဗျား ပစ်ရင် တင်တင်နွယ် အရင်သေမယ် ..”
အမှောင်ထဲက မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အသံ ..။ ရန်သူ က ဘယ်နှစ်ယောက်မှန်း သူမခန့်မှန်းနိုင် ..။ ခဏတာ တွေဝေနေပြီးမှ ဦးသောင်းထိုက်စိုး သူ့ဒသမ ၃၈ ကို့လ် အမျိုးအစား ပြောင်းတို ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို သူရပ်နေရာဘေးက ကောင်တာပေါ်ကို တင်လိုက်သည် ..။
“ ခေါင်းပေါ်လက်တင်ထား .. ဉာဏ်မများနဲ့.. ဦးနှောက်တွေ ပြန့်ကျဲသွားမယ် …”
တိုးပေမဲ့ ခက်ထန်မာကျောတဲ့ မိန်းမအသံ ..။ ဘယ်သူလဲ…။ ရန်သူ ဘယ်သူလဲ …။ ဦးသောင်းထိုက်စိုး စဉ်းစားသည်။ အမှောင်ထဲက ထွက်လာတာက သူ့မိန်းမ တင်တင်နွယ် ..။ လက်ပြန်ကြိုးတုပ် ခံထားရ သည် ..။ ပါးစက်မှာလည်း တိတ်နဲ့ ကပ်ထားခံနေရ သည် ..။ တင်တင်နွယ်ရဲ့ နောက်က မိန်းမတစ်ယောက် ထွက်လာသည် ..။ ဆူးခက် အမည်ခံ အသွင်ယူခဲ့တဲ့ မူမူ …။
“ဘယ်လိုလဲ.. သောင်းထိုက်စိုး ..ခင်ဗျား ပြောခဲ့တုန်းက ထိပ်တန်းလျို့ဝှက်ဆို ..ခုတော့ ခင်ဗျား ပါးစပ်က မလုံလို့ ကာဗာလဲပေါ်..ကျမလည်း မုဒိန်းအကျင့်ခံရတယ်.. လွတ်အောင် ပြေးနိုင်လို့သာ မသေတာ .. ဘက်ကပ်လည်းမရှိ .. စခန်းငယ် (ဆေ့ဖ်ဟောက်စ်) လည်း ဝင်လို့မရ ..ခင်ဗျား ဘယ်လို ဌာနခွဲမှူး လုပ်နေတာလဲ … ခင်ဗျားကို သစ္စာဖောက်တို့ သွားရာ လမ်းကို ပို့ရမယ် …”
အနီးကို ရောက်လာသော မူမူသည် ဦးသောင်းထိုက်စိုးကို ရုတ်တရက် သူမ ချိန်ရွယ်ထားတဲ့ အူဇီသေနတ်ဒင်နဲ့ ထုချလိုက်သည် ..။ ဦးသောင်းထိုက်စိုး ..ဝုန်းကနဲ ကြမ်းပြင်ပေါ် မှောက်ရက်ကျသွားသည် ..။
“ပြန်ထ ..ခင်ဗျား ယောင်္ကျား မဟုတ်ဘူးလား .. သစ္စာဖောက် ..လူယုတ်မာ …”
“ ငါ..ငါ သစ္စာမဖောက်ဘူး ..ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘူး ..ငါ ..ငါ ..စခန်းငယ်ရော ဘက်ကပ်ရော စီစဉ်ထားတယ် ..”
“ ဘာ …သွေးရူးသွေးတန်းတွေ လျှောက်ပြောမနေနဲ့ .. ခင်ဗျား ထ… ဟိုစားပွဲပေါ်မှာ .. လက်ပ်တော့ကွန်ပြူတာ ဖွင့်ထားတယ် .. ခင်ဗျား အမှားကို ညွှန်ချုပ်ဆီ အီးမေးလ်နဲ့ ရေးပို့စမ်း .. ဒါမှ သူ့လက်အောက်က ဌာနခွဲမှူးတစ်ယောက် ဘယ်လောက် သောက်သုံးမကျလဲ ဒင်းသိမယ် .. မကျေနပ်ဘူး … ဒင်းတို့ အားလုံးကို လက်စားချေ မယ် ..”
မူမူသည် ဒေါသတကြီးနဲ့ ကုန်းထနေသော ဦးသောင်းထိုက်စိုးကို ကန်သည် ..။ အနက်ရောင် တောစီး ဖိနပ်ရှည်ကို စီးထားသော မူမူရဲ့ ကန်ချက်က ပြင်းထန်လှသည် ..။
“အား …မလုပ်..မလုပ်ပါနဲ့ …..”
“ ထစမ်း ..ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်…”
“အီးမေးမှာ ဘာ…ဘာပို့ရမှာလဲ …”
“ ခင်ဗျား သောက်သုံးမကျလို့ ကျမ အကျင့်ခံရတာ ရေး ..စောက်ပတ်တင်မက ဖင်ပေါက်ကိုပါ အကျင့်ခံရတာ ရေး.. ဆေ့ဖ်ဟောက်စ်သော့ မထားထားတာ ရေး ..ဘက်ကပ်ထားဖို့ လုပ်ထားရက်နဲ့ အရေးအကြောင်းပေးလာတော့ ဘက်ကပ် မရှိနေတာ ရေး … မြန်မြန်ရိုက် .. ဘာနှေးနေတာလဲ…”
ဇက်ပိုးကို ရိုက်ထည့်ပြန်သည် ..။ တရားခံများကို နှိပ်စက်နေကျ ဦးသောင်းထိုက်စိုး ..သူလုပ်ခဲ့တာမျိုး အရိုက်အနှက်တွေ ပြန်ခံနေရသည် ..။ အားလုံး ရေးအပြီး …မူမူ က..
“ ဆက်ရိုက် ..ဒီအချိန်က စပြီး မူမူဆိုတဲ့ ကောင်မက နင်တို့ ဌာနကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးတော့မယ်လို့ … မိုက်ပြီဟေ့ဆိုရင် ..တဇောက်ကန်းဘဲ … လာမစမ်းနဲ့ ကြမ်းပစ်လိုက်မယ် ….”
ဦးသောင်းထိုက်စိုး အားလုံးရိုက်အပြီး ..
“ ကဲ..ပို့လိုက် ..”
လို့ သေနတ်ပြောင်းနဲ့ နောက်စိကို ထိုးကာ ပြော သည် ..။
“မ..မ…မသတ်ပါနဲ့ ..ငါ တောင်းပန်ပါတယ်.. မူမူရယ် ….”
“ ဒါဆို ကျမမေးတာ ဖြေ ..ကျမ အန်ဒါကာဘာ လုပ်နေတာ ဘယ်သူ့ကို ပြောသေးလဲ …”
“ ရန်ကုန်ဌာနချုပ်က လွှတ်လိုက်တဲ့.. စူးမကို မင်းကို ဘက်ကပ်လုပ်ဖို့ တာဝန်ပေးရင်း ..ငါ..ငါ ပြောပြမိတယ် ..သူကလည်း မင်းလိုဘဲ ထိပ်တန်း အဆင့် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မို့ ပြောပြလိုက်တာဘဲ.. ငါ.. သစ္စာမဖောက်ဘူး …”
“ စူးမ …..”
မူမူရဲ့ သေနတ်ပြောင်းက ဦးသောင်းထိုက်စိုးရဲ့ နားထင်ကို တေ့ထောက်လိုက်သည် ..။
“ မ….မ…..မလုပ်ပါနဲ့ ….”
ရဲလွန်းသည် ဒုချုပ်က သူ့ကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး .. အသွင်ယူတဲ့ မူမူ (ခေါ်) ဆူးခက် အကြောင်းကို ပြောပြပြီး ..မူမူကို ရှာဖွေဖို့ တာဝန်ပေးတာကြောင့် နောက်ဆုံး မူမူ ပျောက်သွားသော တောင်စခန်းမြို့လေးဆီကို ခရီးထွက်ခဲ့ရသည် ..။ မူမူ ဘာကြောင့် ပျောက်သွားသလဲ ..ဌာနချုပ်က မသိ ..။ တပတ်တစ်ခါ သတင်းပို့နေကျ မပို့တော့ ..။ သူမ ရှိနေတဲ့ မြို့က အရေးပေါ် ဆေ့ဖ်ဟောက်စ် တစ်ခုက ငွေတွေနဲ့ သေနတ်တွေ ယူသွားလို့ မူမူ သည် တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်နေပြီလို့ ဒုချုပ်တို့ ယူဆပြီး ရဲလွန်းကို ချက်ချင်းလိုက်သွားဖို့ တာဝန်ပေးတာ ဖြစ်သည် ..။
ရဲလွန်းသည် လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ထဲ အကြမ်းဖက် ဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သော အကြမ်းဖက်သမားတွေကို လိုက်လံ ဖော်ထုတ်နေတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေသူ ဖြစ် သည် ..။ ဒုချုပ်က လက်ရှိတာဝန်များကို သူနဲ့ တွဲလုပ်နေသော ယူနစ်နဲ့ လွှဲထားခဲ့ပြီး မူမူကို လိုက်လံ စုံစမ်းဖို့ တာဝန်ပေးသည် ..။
ရဲလွန်း တောင်စခန်းမြို့လေးကို ရောက်သွားသော အခါ ဒီနယ်မြေတာဝန်ခံ ဌာနခွဲမှူးနဲ့ သူ့ဇနီးကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်သွားကြောင်း ..ဒေသခံဝန်ထမ်းများက ပြောပြတာနဲ့ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ ဦးသောင်းထိုက်စိုးရဲ့ နေအိမ်ကို ရဲလွန်း ရောက်ရှိသွား ခဲ့သည် ..။ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံးကို ပစ်သတ်သွားသည် ..။ ထူးခြားတာက ဦးသောင်းထိုက်စိုးရဲ့ စအိုပေါက်မှာ ရာဘာလိင်တန်ချောင်းကြီး တန်းလန်း ထိုးထည့်ထားတာ ဖြစ်သည် ..။
သူတို့ဌာနခွဲ ..သဲလွန်စရှာဖွေရေး ယူနစ်က လူတွေ လက်ဗွေ..နဲ့ သဲလွန်စ ဘာကျန်ခဲ့သလဲ အသေးစိတ် ရှာဖွေနေကြတာ ရဲလွန်း တွေ့ရ သည် ..။ ထမင်းစားခန်းက စားပွဲပေါ်မှာ လက်ပ်တော့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံး ရှိနေသည် ။ သဲလွန်စ ရှာဖွေရေး ယူနစ်က တာဝန်ခံက ဒီလက်တော့ပ်ကနေ သူတို့ဌာန ညွှန်ချုပ်ဆီ အီးမေးတစ်စောင် ပို့ထားကြောင်း ..ပြသ သည် ..။ ရဲလွန်းသည် အမှုသဘာဝကို သဘောပေါက်သွားချိန် ရန်ကုန်ဌာနချုပ်က သူ့ကို ဖုန်းခေါ်လာ သည် ..။
ကာရာအိုကေ ဘားတစ်ခုမှာ ဝေမှိုင်းချိုဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်း အသိပေးသည် ။ ဒီဝေမှိုင်းချိုသည် မူမူ အသွင်ယူပြီး လိုက်ထောက်လှမ်းနေတဲ့ ဒုစရိုက်အဖွဲ့ကြီးက ဂိုဏ်းသားတစ်ယောက် ဆိုတာရယ်.. ဝေမှိုင်းချိုရဲ့ ဖင်ပေါက်ထဲကို လိင်တန်အတုကြီး ထိုးသွင်းထားတာရယ်ကို ရဲလွန်း သိရသည် ..။ မူမူသည် သူမကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့သော ဝေမှိုင်းချိုကို ရက်ရက်စက်စက် လက်တုံ့ပြန်လိုက်တာဘဲလို့ သဘောပေါက်ရသည်။ မူမူသည် ဥပဒေဘက်တော်သား ဘဝမှ လူသတ်သမ ဝရမ်းပြေး ဘဝကို ရောက်ရှိသွားပါပကောလား …။
ရန်ကုန် ဌာနချုပ်က မူမူကို အပူတပြင်း လိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့ ရဲလွန်းကို ညွှန်ကြားသည် ..။ သူ့ကို ကူညီဖို့ အဖွဲ့ငယ်တစ်ခု စေလွှတ်ပေးမည်လို့လည်း ပြော သည်..။
နေအုပ်စိန်သည် သူ့ရှေ့မှာ ရောက်နေတဲ့ သူ့တပည့် ပေတိုးကို
“ ဟေ့ကောင်..သေချာရဲ့လား ..”
လို့ မေးလိုက်သည် ..။ ပေတိုးက သူတို့ ဆူးခက် (ခေါ်) မူမူ့ကို ခြေရာခံမိပြီလို့ ပြောလို့ ..။ သူတို့ဘော့စ်သည် အန်တီပင်စီ ညံ့ဖျင်းလို့ မူမူ ထွက်ပြေးပြီး သူတို့ စခန်းတချို့ကို စွန့်ပစ် ခြေရာဖျောက်ခဲ့ရလို့ ဆုံးရှုံးတာများနဲ့ ဝေမှိုင်းချိုလို စိတ်ချရတဲ့ တပည့်ကောင်းတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့် အလွန် စိတ်ဆိုးနေပြီး ဘာဘဲလုပ်လုပ် အမှားအယွင်း ကင်းလိုသည် ..။ ပေတိုးက ..
“သေချာတယ် ဆရာ ..ကျနော် ဒီဆော်နဲ့ အကြာကြီး အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့ဘူးတာဘဲဟာ.. သူ့ရုပ်ကို ခွေးချီသွားတောင် မှတ်မိပါတယ် ..သူမှသူပါဘဲ ..”
“ ဒီကောင်မကို မင်းတို့ တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ အိမ်က ဘယ်သူ့အိမ်လဲ ..”
“ သူ့ဘဲလို့ ထင်တာဘဲ ..ရဲပြုတ်လို့ ပြောကြတယ် ..နာမည်က ဟန်ထူးမောင် ..တဲ့ .. အခုတော့ ပွဲစားယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်ပဲ.. ဒီကောင်မ ဒီကောင့်အိမ်မှာ ရှိနေတာ သေချတယ် ..ဆရာ ..”
“ သေချာရင် ..အပိုင်စောင့်ပြီး ဝိုင်းသမ လိုက်ကြမယ် ..အချိန်ကောင်း ကြည့်ပြီး ဝုန်းလိုက်ကြတာပေါ့ ..”
“ ကောင်းပြီ ဆရာ..ကျနော် ..ဖော်လွန်းကို မျက်ခြေမပြတ် တစ်နေရာက စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတယ် …”
နေအုပ်စိန် ..အန်တီပင်စီ့ဆီကို ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်ပါသည်။
ဟန်ထူးမောင် ထင်းရှူးသေတ္တာ အရှည်ကြီးကို ထမ်းပြီး သူ့တိုက်ခန်းကို ပြန်ရောက်လာတော့ မူမူ ရေချိုးနေသည် ။ မူမူ ရေချိုးခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာတော့ အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ ဟန်ထူးမောင်ကို တွေ့ သည် ..။
“ပြေတယ် ..ဟိုဘက်ကအလာ ရဲတွေ စုံထောက်တွေ တပြုံကြီး ခြေရှုပ်နေလို့ မနည်း ဘတ်လာရတယ် မူမူ ..”
“ အင်း..ဒါကြောင့်လဲ မူမူက ကိုမောင့်ကို အားကိုးတာ.. သိလား .. ကျေးဇူးဘဲ ကိုမောင် .. ဒီတစ်ခါပြီး ရင် မူမူ အလုပ်ပြန်လုပ်တော့မှာပါ …”
ကိုယ်မှာ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ပတ်စည်းထားသော မူမူ့ကို ဟန်ထူးမောင်က ပွေ့ဖက်ကာ မူမူရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူဖောင်းဖောင်းလေးကို ငုံကာ စုပ်လိုက် သည် …။ မူမူကလည်း ဟန်ထူးမောင် လည်ဂုတ်ကို ပြန်လည်သိုင်းဖက် လိုက်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းဘဲ ပြန်လည် နမ်းစုပ်လေသည် ..။
ဟန်ထူးမောင် ရဲ့ လက်တဖက် က မူမူ့တင်သားထယ်ထယ်ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ဖျစ်နေသည် ..။ မူမူ ကလည်း အားကျမခံ ဟန်ထူးမောင်ရဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ သံကြယ်သီးကို ဖွင့်ဖြုတ်သည် ..။ နှစ်ယောက်စလုံး အသက်ရှူတာတွေ ပြင်းထန် မြန်ဆန်လာကြသည် ..။ သွေးသားတွေ ဆူဝေ ထကြွကုန်တာကြောင့် မူမူ ဇစ်ဖြုတ်လိုက်သော ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဟန်ထူးမောင်က အောက်ခြေကို ခြေနဲ့နင်းပြီး ချွတ်ပစ်လိုက်သလို မူမူ ပတ်စည်းထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုလည်း ဟန်ထူးမောင်က ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်သည် ..။ မူမူ့ကိုယ်မှာ အဝတ်ဆိုလို့ ချည်တမျှင်တောင် ရှိမနေတော့ ..။
မူမူရဲ့ မိမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးတီး အလှအပတွေကို ဟန်ထူးမောင် တွေ့တော့ ကာမရာဂစိတ်တွေက အမြင့်ဆုံး ထကြွသွားပြီး မူမူ့ကို ကုတင်စောင်းမှာ ပက်လက်လှန်ချလိုက်ပြီး မူမူ့ပေါင်တန်ဖြူဖြူသွယ်သွယ်တွေကြားထဲ ခေါင်းထိုးဆိုက်ကာ မူမူရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို နမ်းရှုံ့လေသည် ..။ မူမူမှာ ဟန်ထူးမောင်ရဲ့ နှာခေါင်းချွန်ချွန်က သူမအင်္ဂါစပ်ရဲ့ အရသာဖူးအစိ ကို ပွတ်သပ်ခလုတ်တိုက်မိသွားတာမို့ နှုတ်ခမ်းထူအမ်းအမ်းလေး ပွင့်ဟကာ.. တအိုအိုနဲ့ ညည်းနေရသလို သူမ ပေါင်တန်တွေကို ကားဖြဲကာ ဟန်ထူးမောင်ရဲ့ ဆံပင်တွေကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင် ဆွဲထား သည် ..။
ဟန်ထူးမောင်ရဲ့ လျှာက သူမအင်္ဂါစပ် နှုတ်ခမ်းသား တွေကို စတင်ယက်ပေးတော့ မူမူမှာ ဖင်တကြွကြွနဲ့ အရသာ ရှိလွန်းနေတော့ .. အို့ဟိုဟို ..အား.. အား… အား… အား.. နဲ့ အော်ညည်းနေသည် ..။ ဟန်ထူးမောင်ရဲ့ လျှာက အပြားလိုက်ကြီး ဖိဖိယက်နေသည် ..။
ဟန်ထူးမောင်သည် လာဘ်မစားရပါဘဲနဲ့ သူ့အထက်လူကြီးတွေက ဟန်ထူးမောင်ကို ရာထူးမှချပြီး စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ကြတာကြောင့် ဟန်ထူးမောင် အလုပ်က ထွက်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်သည် ..။ မူမူက သူ့ချစ်သူ ဟန်ထူးမောင်ရဲ့ အမှုကို စုံစမ်းကြည့်သောအခါ အထက်လူကြီးများသည် ဟန်ထူးမောင်က သူတို့ကို တန်စိုးလက်ဆောင် မဆက်သလို့ အမျက်သိုကြပြီး အပြစ်ရှာကြတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပေသည် ..။
သို့ပေမဲ့ ဟန်ထူးမောင်က အလုပ်ထွက်ပြီးနေပြီ ..။ ဟန်ထူးမောင်သည် ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ် စိတ်နာနေသူ ဖြစ်သည် ..။ မူမူလည်း ဒီလို သူမဌာနအပေါ် လက်စားချေတာတွေ လုပ်လာသော အချိန်မှာ ချစ်သူနှစ်ဦး ပူးပေါင်းမိသွားကြတော့သည် ..။ စိတ်နာကျည်းသူနှစ်ယောက် ပူးပေါင်းမိပြီး အန်တီပင်စီတို့ ဂိုဏ်းကိုရော ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ကိုပါ ထိုးဖောက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်လာလေသည် …။
ဟန်ထူးမောင်သည် မူမူ့ခါးသိမ်လေးကို သူ့သန်မာတဲ့ လက်တွေနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ကာ ဖောင်းကြွနေသော မူမူ့ အင်္ဂါစပ်ခုံးခုံးမို့မို့ကြီးကို အားရပါးရ ယက်ပေးလေသည် ..။ မူမူမှာ ဟန်ထူးမောင်နဲ့ ကွဲကွာနေတာ ကြာပြီး ဘယ်ယောင်္ကျားနဲ့မှ အခုလို ကာမဆက်ဆံတာ မရှိခဲ့လို့ သွေးသားတွေ တအားညဆူကြွနေတာမို့ သူမတင်ပါးကြီးတွေကို ကော့ကော့ပေးနေ သည် ..။ တပြတ်ပြတ် ယက်သံတွေနဲ့ တအီးအီး တအင်းအင်း ညည်းသံတွေက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တိုက်ခန်းလေးထဲ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြီး ကြားနေရသည် ..။
“ တော်ပြီ..ကိုမောင် …မူ့ကို လုပ်ချင်လုပ်တော့..”
ဟန်ထူးမောင်က ယက်နေဆဲ ..။ သူ့လျှာထိပ်က မူမူ့ အဖုတ်တွင်းထဲကို စွပ်ကနဲ စွပ်ကနဲ ဝင်ရောက်နေသည် ..။ မူမူက ယားလွန်းနေပြီး ယက်ပေးတာနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘဲ လိင်တန်နဲ့ ထိုးဆောင့်ပေးစေချင်နေပြီ ..။
“ ကိုမောင် … လုပ်ပါတော့ .. မူ မနေနိုင်တော့ဘူး…”
ဟန်ထူးမောင်လည်း မူမူက ထပ်ပြီး တောင်းဆိုနေလို့ အဖုတ်ယက်ပေးနေတာကို ရပ်ပစ်လိုက် သည် ..။ ဟန်ထူးမောင်ရဲ့ ပါးစပ်တဝိုက် အရေများ စိုပေနေသည် ..။ မူမူက ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးလိုက်သည် ..။ ဟန်ထူးမောင် ဒီလို ဖင်ထောင်ပေးတာ ကြိုက်မှန်း မူမူ သိလို့ …။ ဟန်ထူးမောင်လည်း အလိုက်သိတဲ့ မူမူ့ကို သဘောကျသွားပြီး.. မူမူ့ ဖင်တုံး တောင့်တောင့်ကားကားတွေ အနောက်မှ ဝင်ရပ်ခါ ဖင်နှစ်လုံးကြားက ဖောင်းပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို သူ့လိင်ချောင်းရဲ့ ထိပ်ဖူးကြီး နဲ့ စုံချီ ဆန်ချီ ပွတ်လှိမ့်လိုက် သည် ..။ မူမူ့အဖုတ်ကြီးမှာ ပေစိုနေတဲ့ အရေများ.. လိင်တန်ထိပ်ဖူးကြီးမှာ ပေလူးသွားသည် ..။
မူမူ့ ဖင်ပေါက်ညိုညိုလေးကိုလည်း အသဲယားစရာ မြင်နေရတာကြောင့် ဒီလို ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးတဲ့ ပုံစံကို ဟန်ထူးမောင် သဘောကျတာ ဖြစ် သည် ..။ အဖုတ်ကို စိတ်တိုင်းကျ စပ်ရှက်နေတုန်းမှာ ဖင်ပေါက်လေးကိုလည်း ကလိချင်တိုင်း ကလိနိုင်လို့ ဒီလိုပုံစံနဲ့ လုပ်တိုင်း မူမူ့ဖင်ပေါက်ကို လက်မ နဲ့ ထိုးဆွကာ ကလိပေးနေတာကြာပြီ..။ မူမူ့ဖင်ပေါက်ကို တနေ့တော့ ဖွင့်မည်လို့ စိတ်ကူးထားသော ဟန်ထူးမောင်သည် ဒီနေ့လည်း မူမူ့ဖင်ပေါက် ညိုညိုလေးကို ကလိရန် သူ့လက်မကို တံတွေးများနဲ့ ဆွတ်လိုက်သည် ..။
မူမူ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲ လိင်တန်ကို ထိုးသွင်းရန် တေ့လိုက်စဉ် သူတို့တိုက်ခန်း ဝင်ပေါက်က အသံများ သဲ့သဲ့ကြားလိုက်လို့ မထိုးသွင်းလိုက်သေးဘဲ နားစွင့်နေသည် ..။ ဖင်ထောင်ကုန်းပေးထားသော မူမူသည်လည်း နားပါးသော ..အလေ့အကျင့်များနေပြီဖြစ်တဲ့ ထောက်လှမ်းစာရေးဝန်ထမ်း တစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့်
“ ကိုမောင် ..လူ ….လူ….”
လို့ လေသံလေး နဲ့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ဟန်ထူးမောင် လည်း ကုတင်ဘေးကို လှိမ့်ဆင်းလိုက်ပြီး ဘေးက စားပွဲပေါ်က သူ့သေနတ်ကို ဆွဲကိုင်လိုက်သည် ..။ မူမူလည်း ခေါင်းအုံးအောက်မှ သူမရဲ့ သေနတ်ကို လှမ်းယူလိုက်သည် ..။ ဝုန်းကနဲ အခန်းတံခါး ပွင့်သွားပြီး လူတွေ ခုန်ဝင်လာသည် ..။ သူတို့ လက်ထဲမှ သေနတ်များနဲ့ တဘုန်းဘုန်း တဒိန်းဒိန်း ..ဒလစပ် ပစ်ခတ်လေရာ စောစောက မူမူနဲ့ ဟန်ထူးမောင်တို့ ချစ်ရည်လူး ချစ်စခန်းဖွင့်နေကြတဲ့ ကုတင်ကြီးကို ကျည်ဆံများ တဖြောင်းဖြောင်း ထိမှန်ကုန်သည် ..။ ယမ်းငွေ့များ ဖုံးလွှမ်းကုန်သည် ..။
ကုတင်အောက် ကြမ်းပြင်မှာ မှောက်ရက် ရှိနေကြသော ဟန်ထူးမောင်နဲ့ မူမူတို့ ဝင်လာသူတွေကို ပြန်လည် ပစ်ခတ်ကြပြီ …။ ဒိန်းဖေါင်း.. ဒိန်းဖေါင်း နဲ့ ပစ်ခတ်သံများနဲ့အတူ ဝင်လာသူတွေ တချို့ကို ထိမှန်ကုန်သည် ..။ ဘုန်းကနဲ ပြုတ်ကျလဲပြို ကုန် သည် ..။ မူမူ နဲ့ ဟန်ထူးမောင်လည်း ကျည်ကပ်ထဲက ကျည်ဆံတွေ ကုန်သည်အထိ ဆက်တိုက် ပစ်ခတ်အပြီး မူမူက အခန်းထောင့်မှာ ထောင်ထားတဲ့ အူဇီ စက်သေနတ်တိုလေးကို ပြေးယူသည် ။
ဝင်လာသူတချို့ အခန်းပြင်ကို ဆုတ်ပြေးတော့ မူမူလည်း တဟုန်ထိုး ပြေးလိုက်ကာ အူဇီကို အော်တိုဆွဲ ပစ်ခတ်တော့ အခန်းအဝမှာ ရန်သူနှစ်ယောက် ကော့လန်ကာ လဲကျသွားရသည် ..။ ကျယ်လောင်သော သေနတ် ပေါက်ကွဲသံတွေကြောင့် ဟန်ထူးမောင် သူမကို တစုံတခု လှမ်းပြောတာကို နားတွေ တအားအူနေလို့ မကြား ..။ အခန်းပြင်ထိ ထွက်ကာ ပစ်ခတ်သည် ..။
ရန်သူတချို့က တဆစ်ချိုး အကွေ့နံရံမှာ အကာအကွယ်ယူပြီး ပစ်ခတ်ကြလို့ မူမူ အခန်းထဲ ပြန်ခုန်ဝင်လာသည် ..။ ဟန်ထူးမောင်လည်း ကျည်ကပ်အသစ် လဲလိုက်သလို နောက်ထပ် ပစ္စတို တစ်လက်ကို သူ့ကျောပိုးအိတ်ထဲက ထုတ်ယူကာ သေနတ်နှစ်လက်ကို လက်တစ်ဖက်စီ ကိုင်ကာ ..
“ မူ ..လစ်စို့ ..လောင်ခြာကိုယူ.. ပြတင်းပေါက်ကဆင်း.. ကိုယ် ခံပစ်ထားမယ် ….”
လို့ အော်ပြောလေသည် …။မူမူလည်း စောစောက ဟန်ထူးမောင် သယ်ယူလာသော ထင်းရှူးသေတ္တာရှည်ကြီးကို ဖွင့်ပြီး အတွင်းက အေတီဖိုး ရော့ကက်လောင်ခြာကြီးကို သိုင်းကြိုးနဲ့ ပုခုံးမှာ လွယ်လိုက် သည် ..။ အန်တီပင်စီတို့ အဖွဲ့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခြေမှုန်းပစ်ဖို့ ဟန်ထူးမောင်ကို တောတွင်း အဆက်အသွယ်တွေဆီက ဒီလောင်ခြာကို သွားရောက် ဝယ်ယူစေတာဖြစ်သည် ..။
ရန်သူတွေ တော်တော်များများ ထိကုန်တာကြောင့် စောစောကလို အတင့်မရဲကြတော့ ..။ သေနတ်သံတွေကြောင့် ရဲတွေလည်း မကြာခင် ရောက်လာကြမှာမို့ မူမူနဲ့ ဟန်ထူးမောင်ရော.. ရန်သူ အဖွဲ့များပါ ဒီနေရာက ခွာကြဖို့ ကြိုးစားကြလေသည် ..။
တိုက်အနောက်ဘက်မှာ ရပ်ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဝီလီဂျစ် အဖြူလေးပေါ်ကို ခုန်တက်မောင်းထွက်
လိုက်ကြသည် ..။ ရန်သူကို သူတို့ မချေမှုန်းခင် ရန်သူက သူတို့ကို ဝင်တိုက်ခိုက်သည် ..။ ပေါ့လို့ မဖြစ်တော့။
နေပိုင်စိုးသည် တညလုံး တရားခံ စစ်နေသည် ..။ ဒီမင်္ဂလာဒုံက သူတို့ စစ်ကြောရေးစခန်းကြီးထဲ သူတို့ ဖမ်းမိလာသော ဒုစရိုက် ဂိုဏ်းသားများကို နေပိုင်စိုးတို့ လူလဲနဲ့ စစ်နေကြ သည် ..။ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ ဘယ်သူလဲ.. သူတို့ရဲ့ မြေပေါ် အဆက်အသွယ်တွေဟာ ဘယ်သူလဲ .. သူတို့စခန်းများ ဘယ်မှာလဲ ..စသဖြင့် သဲသဲမဲမဲ စစ်ဆေးနေကြသည် ..။
တညလုံး စစ်မေးပေမဲ့ ခေါင်းမာသော တရားခံများကြောင့် ထင်တိုင်း မပေါက်ခဲ့…။ ရဲဘော်တစ်ယောက် လာပေးသော ကော်ဖီမတ်ခွက်ကို ယူသောက်လိုက်သည် ..။ သူတို့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုသိုက်စိုး ရောက်လာသည် ..။
“ဟေး..နေပိုင်.. နားလိုက်တော့.. မောင်ရင်တို့ တညလုံး ပင်ပမ်းလှပြီ .. ကိုယ်တို့ လူလဲပေးမယ်.. ဖုန်းဖွင့်ထား .. ကိုယ်လိုအပ်ရင် ခေါ်လိုက်မယ် .. နားတော့ …”
ပုခုံးပေါ်တင်ထားသော စစ်မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အသေးစားလေးနဲ့ သူ့အဆီပြန်နေတဲ့ မျက်နှာကို သုတ်သည် ..။ နေပိုင်စိုးသည် တဇောက်ကန်း လို့ သူတို့က ခေါ်ကြတဲ့ ရဲလွန်းတို့လို တရားခံကို ထိုးတာ ရိုက်တာမလုပ် ..။ မနှိပ်စက် ..။ ဒါကြောင့် သိလိုတာလည်း ခုထိ မသိရသေး ..။
သို့ပေမဲ့.. ဝါရင့်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ စစ်ဆေးရေး အရာရှိတစ်ယောက်မို့ နေပိုင်စိုးသည် ဒုစရိုက်ကောင်တွေ ရဲ့ စခန်းကို ခန့်မှန်းလို့ ရသင့်သလောက် ရပြီ ..။ အင်း ..သေချာအောင် ထပ်လုပ်ပြီးမှ အထက်ကို တင်ပြပြီး ..အထူး စစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ဆွပ်) တွေနဲ့ ဝိုင်းရမည် ..။ သူနဲ့ အစားးထိုး နေရာချင်းလဲသော အရာရှိကို သူစစ်မေးနေတာတွေ အကြောင်း ပြောပြအပြီး ..စစ်ကြောရေးစခန်းကြီးထဲက ထွက်သည် ..။
အင်း..စူးမတော့ ညက တမျှော်မျှော်နဲ့ ဖြစ်နေမှာ ဘဲ ..။ ကားမောင်းရင်း..စူးမကို ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ..။
“ဟိတ်..ပြန်လာပြီ လား …”
“ အင်း..စူး ..ဆောရီးဘဲ ..ဘိန်းဂိုဏ်းကြီး တစ်ခု းကို ကိုယ်တို့ တညလုံး စစ်နေရလို့ …စူး ဘရိတ်ဖတ်စ် ဘာစားချင်လဲ.. ကိုယ် ဝင်ဝယ်ပြီး အတူတူစားကြမယ် လေ ..”
“ စားချင်တာကတော့ ..ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်နဲ့ အမဲကြော် မွမွလေး …ဟိဟိ ..”
“ ရတယ် စူး ..ကိုယ်ဝယ်ခဲ့မယ် ..”
“ စူးက ကုလား လဘက်ရည် အကောင်းစား ဖျော်ထားမယ် ..ဆီးယူး ကိုနေ ..”
နေပိုင်စိုး နဲ့ စူးမ အိန္ဒိယကလာတဲ့ ဘရွတ်ဘောင်း လဘက်ခြောက်ကို ကျကျနန ကျိုပြီး နို့ဆီနဲ့ ဖျော်သောက်လေ့ရှိပြီး ကုလားလဘက်ရည်လို့ ခေါ်ကြ သည် ..။ နေပိုင်စိုး ပဲပြုတ်ထမင်းကြော် နဲ့ အမဲသားမွမွကြော် ဝင်ဝယ်ပြီး.. စူးမ ဆီကို ရောက်လာသည် ..။
စူးမသည် တီရှပ်ပွပွကြီးဝတ်ထားသည် ..။ ရင်ဘတ်မှာ.. အဝါရောင် ကြက်ပေါက်စလေးက သေနတ် နှစ်လက်ကိုင်ရင်း မျက်မှောင်ကြုံ့နေသည့် ကာတွန်းပုံ နဲ့ . . ။ ချစ်က်ဝစ်သ်ဂန်းစ် ဆိုတဲ့ စာတန်းနဲ့ ..။
ကုလား လဘက်ရည်မွှေးမွှေး ဖျော်ကာ စောင့်နေသော စူးမနဲ့ နေပိုင်စိုး ဘရိတ်ဖတ်စ် စားကြ သည် ..။ ပြီးတော့ နေပိုင်စိုး ရေချိုးသည် ..။ သူ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လိုက်တာနဲ့ အပြင်မှာ အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေသော စူးမက သူ့ကို အငမ်းမရ နမ်းစုပ်လေ ယသည် ..။ ခါးမှာ ပတ်ထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါက ဟုတ်ကနဲ ပြုတ်အသွား .. နေပိုင်စိုးရဲ့ လိင်တန်ထွားထွားကြီးက စူးမကြောင့် တင်းမာ တောင့်တင်းပြီး အပေါ်ထောင်နေတာ စူးမ တွေ့လိုက်ရလေသည်။
စူးမရဲ့ တီရှပ်ပွပွကြီးကိုလည်း နေပိုင်စိုးက ဆွဲလှန်တင်ကာ ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ..။ အောက်မှာ ဘာမှ ခံမဝတ်ထားတာကြောင့် တီရှပ်ကြီးကို ချွတ်ခွာလိုက်ရော စူးမ ဗလာကျင်းသွားပြီ ..။ ဖွံ့ထွားတဲ့ စနေနှစ်ခိုင် ရင်သားတွေက ထိုးထိုးထောင်ထောင် နဲ့ ..။ ဖင်တွေက ကော့ကောက်နေ သည် ..။ ဆီးခုံထိပ်နားမှာ အမွှေးမဲမဲစုစုလေး ရှိနေပေမဲ့ ဖောင်းမို့တဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးမှာတော့ အမွှေးမရှိ ..။ ဘာစကားမှ မဆိုမိကြဘဲ.. နှစ်ယောက်သား တိုင်ပင်ထားသလို .. ဦးတည်ချက် ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းဘို့ဘဲ ကြိုးစားကြလေသည် ..။
စူးမကို အပေါ်က တက်ခွ ပေါင်တွေ ဆွဲဖြဲကားကာ လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးဘဲ တက်လုပ်လေသည် .. ။ စူးမ လည်း တညလုံး အိပ်လို့မရ.. ချစ်သူကို စောင့်နေခဲ့ရတာမို့ ..နေပိုင်စိုး မလုပ်ခင်ကတည်းက သူမ အဖုတ် သည် အရေတွေ စိုစိုရွှဲကာ နေခဲ့သည် ..။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ ကာမကို ဖြည့်ဆည်းပေး ဖို့ ကြိုးစားနေသော နေပိုင်စိုး နဲ့ တက်ညီလက်ညီ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရေး.. တက်ကြွစွာ ကြိုးပမ်းလေတော့သည် ..။
နေပိုင်စိုးရဲ့ တုတ်ခိုင်လှတဲ့ လိင်တန်ကြီးသည် စူးမရဲ့ အဖုတ်ထဲ တင်းကြပ်လှသည် ..။ စူးမ နေပိုင်စိုးရဲ့လည်ဂုတ်ကို ဆွဲဖက်ကာ နေပိုင်စိုး ဆောင့်ထည့်သမျှကို အောက်မှ တန်ပြန်ကော့ပင့်ပေးသည် ..။ သူမ တင်ပါးကြီးတွေကိုလည်း စကောဝိုင်းသလို မွှေ့ရမ်းပေးသည် ..။ တဖတ်ဖတ် တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါနှစ်ခု ပွတ်တိုက် ပေါင်းဆုံရာက ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အသံဘလံတွေ ဆူညံနေသည် ..။ နေပိုင်စိုးရဲ့ ဟင်းကနဲ ဟင်းကနဲ အားယူတဲ့အသံ .. စူးမရဲ့ ထိမိလွန်းလို့ ..တအားအား.. အော်ညည်းတဲ့ အသံတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေ သည် ..။
တူယှဉ်ကာ အပြိုင်အဆိုင် .. ကြုံးကြ ဆောင့်ကြတော့ မကြာခင်ဘဲ ဦးတည်ထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ပြိုင်တူလို တက်လှမ်း ရောက်ရှိသွားကြလေတော့သည် ..။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 19,544
← ယွထနေတဲ့ တီချယ်နှင်း
မှဲ့ပါတဲ့ ပေါက်စီ →